ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် - နောက်သို့
ငါကဗျာဆန်ဆန်ထင်တယ်။ ဤဂြိုလ်သားများသည်အမှောင်ထုထဲမှအာကာသမှတရားမဝင် ၀ င်ရောက်လာပြီးအိပ်မောကျနေသည့်သူတို့၏အိပ်မက်များကိုသူတို့၏ ဦး နှောက်ထဲမှနို့စို့ရန်သူတို့၏ရှည်လျားသော proboscis ကိုအသုံးပြုသည်။ ငါကအခြားသူများပြောနှင့်ပြီးသားစကားလုံးများကိုသာတွန့်ဆုတ်သည်။ ငါ unanitary ရှာပါ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာစကားလုံးအသစ်တွေနဲ့မကြာခဏလာတတ်တယ်၊ အဲဒါကဘယ်သူမှငါ့ကိုနားမလည်တဲ့ပြproblemနာကိုဖန်တီးပေးတယ်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်အသုံးများသောစကားလုံးများကိုပြန်သုံးရမည်။ ၎င်းသည်ဖြစ်တည်မှု၏အထွေထွေပုံရိပ်များဖြစ်သောကြောင့်ဘာသာစကားသည်ပြောဆိုနိုင်သည်။ ဘာသာစကားမှာအဓိကအရာကကမ္ဘာပုံကိုအိမ်တစ်လုံးပေးဖို့ပဲ။ လူတစ် ဦး သည်ဘာသာစကား၏စကားလုံးများကိုလိုက်နာပြီးနောက်၎င်းသည်စဉ်းစားနေသည်ဟုထင်သောအခါ ၀ မ်းနည်းစရာဖြစ်သည်။စစ်မှန်သောအတွေးအခေါ်သည်ဘာသာစကားကိုတက်ကြွစွာပုံဖော်သည်။ ဘာသာစကားဆိုတာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျောရိုးရှိသတ္တဝါတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြောတာကကမ္ဘာကြီးကိုဖန်တီးတာဖြစ်တယ်။ အစ ဦး ၌စကားလုံးပါ!
မှဲ့: ဒီစာအုပ်အကြောင်းကိုဘာကို Psychosaurus ပြောပြပါ
Duck: တစ် ဦး ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးမေးခွန်းတစ်ခုကိုအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ
Psychosaurus နှင့် Carsten?
Psychosaurus: ငါမပြောချင်ဘူး၊ ခေါင်းစဉ်ကစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တယ်
Duck: ဒါဟာငုံ့, က dude!
Giggle: Carsten ကိုငါရေးချင်ရင်သူလည်းအဲဒီမှာရှိတယ်
Giggle - ရထားဘူတာတောင်မှစကားလုံးတောင်ငါနားမလည်ဘူး။
Rabe: အရာရာတိုင်းကိုနားလည်ဖို့မလိုပါဘူး တစ်ခါတစ်ရံမှာဝေးကွာသွားဖို့လုံလောက်ပါတယ်
Detlef နှစ်ဆ dooid
Detlef Doppeldoid သည် ဦး နှောက်၏တစ်ဝက်ကိုကောင်းကောင်းမစဉ်းစားနိုင်ပါ။ ဒက်တယ်သည်အလင်းထက် ပို၍ မြန်သည်ဟုထင်မြင်ရပြီး၎င်းသည်သူ၏လေထုနေရာတွင်အာကာသ - အချိန်ရောင်ရမ်းခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့နောက်သူသည်လက်ဝဲဘက်၊ အပြင်၊ အပြင်ပိုက်ကွန်နှင့်လဲလှယ်သည်။ မင်းအခန်းထဲဝင်၊ မဝင်ဆိုတာသူမသိဘူး။ Detlef Doppeldoid နှင့် ပတ်သက်၍ မကောင်းမှု - အခြားနေ့ကသူသည်လူများဖြစ်သည်ဟုသူထင်သည်။ Detlef သည် Albert Einstein နှင့် Konrad Adenauer တို့၏ခြားနားချက်ကိုလည်းမမှတ်မိပါ။ Detlef အံ့ the ဖွယ်ရာ: '' အတူတူပင် '' နှင့် '' အတူတူပင် '' တူညီကြသည်မဟုတ်လော တစ်ခါတစ်ရံ Mr. Doppeldoid သည်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ စာလုံးပေါင်းအမှားများပြုလုပ်သည်။ သူလုံးဝရှုပ်ထွေးမယ်ဆိုရင် Detlef ကအနာဂတ်ကိုတောင်သတိရနေသေးတယ်။
ကျွန်ုပ်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကိုမသိသောအခါကျွန်ုပ်၏မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားကိုကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်လည်းရှိပါသည်။ နံပါတ်တစ်ခု၊ အားလုံးငါ့အတွက်ပဲ။ ထူးခြားတဲ့။ ပြည်နယ်ကငါ့ကိုချစ်တယ်။ ဒါကငါ့ကိုကူညီပေးသလား။ Detlef Doppeldoid ဟူသောအမည်နောက်ကွယ်တွင်မည်သူရှိသနည်း။ ပလတ်စတစ်ကတ်သေးသေးလေးကဘာကိုသက်သေပြတာလဲ။ ပလပ်စတစ်ကဒ်များကိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ သင်ဒီနေ့အကုန်လုပ်နိုင်တယ် သင်ပင်တစ် ဦး ဝိသေသလက္ခဏာအတုနိုင်ပါတယ်။ ငါအရမ်းပန်းပွင့်ဖြစ်လာတယ်။ ''
ပြောနိုင်သည့်ယုန်ကိုပြောသောယုန်ဟုခေါ်သည်။ စကားပြောသောအခါယုန်သည်စကားပြောသောအခါစားပြီး nibbling ကိုပြောဆိုသည်။ နှုတ်ကပါဌ်ရင်းမြစ်များကိုသူမသိပါ။ သူသည်လက်ရှိတွင်အချစ်စားနေသည်။ အချစ်ဆိုတာသူ့အတွက်စကားလုံးတစ်လုံးပဲ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အစာမစားဘဲစားနိုင်သည်။
အဆိုပါဇီဝဗေဒပညာရှင်သည်ဘဲများ၏အမွေးအတောင်စိတ်ဝင်စားသည်, ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာဒologistနပညာရှင်ဘဲ၏ဖြစ်ခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားသည်။ ဘယ်သူကဘဲပေးသလဲ။ အဖြေ။ ။ 'ဒါဟာ' နှင့်ဖြစ်ခြင်းအတွက်ရလဒ်ပေးခြင်း။ တနည်းအားဖြင့်မေးခွန်းတစ်ခုကိုအောက်ပါအတိုင်းဖြေနိုင်သည် - ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည်ဘဲကိုပေးသည်၊ ဘဲဥကဥကိုဘဲပေးသည်၊ ဘဲလိင်ကဘဲကိုပေးသည်၊ ဘုရားသခင်သည်ဘဲကိုပေးသည်။ မိုးရွာနေသည်။ တကယ့်ကိုပြောသင့်ပါတယ်။ ဤအရာသည်ဘုရားသခင်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာဘုရားသခင်ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ '၎င်းသည်' ဘုရားသခင်ထက်ကြီးမြတ်သည်။ နောက်နိဂုံးချုပ်ရလိမ့်မည် - 'ဘုရားသခင်' သည်ဘုရားသခင်အားအရင်ပေးသောစစ်မှန်သောဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ ဘဲတွေရှိတယ်။ တစ်ခုကမပြောပါဘူး။ ပေးခြင်းသည်ယူခြင်းထက် ပို၍ ပျော်ရွှင်သည်။ ပေးခြင်းသည်ယူတာထက်ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာဒmoreနသည် ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်။ 'အဲဒါ'မရှင်းလင်းသေးသောကြောင့်သင်၎င်း၏မြူကိုမမြင်နိုင်တော့ပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်သင့့့့့့့့့်သော့သော့့့ 'it' သည်လှည့်စားသည်။ ဒါဟာအသိပညာဖြစ်ဟန်ဆောင်။ ငါတို့သည်နောက်တဖန်မိုဃ်းတိမ်မိုးရွာကြောင်းသိကြလျှင်, '' ဒါဟာ '' မိုးရွာသည်။ ဤငြင်းပယ်မှုက 'it' ကိုပေးသည်။ 'Elwititsche မရှိ' ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ဤဘဲကိုမပေးနိုင်သောဤသူသာလျှင်မည်သူဖြစ်နိုင်သနည်း။ဒီဘဲတွေကိုမပေးနိုင်တာ Elwititsche မရှိဘူး! '' ဒါဘယ်သူဖြစ်နိုင်တာလဲ ''ဒီဘဲတွေကိုမပေးနိုင်တာ Elwititsche မရှိဘူး! '' ဒါဘယ်သူဖြစ်နိုင်တာလဲ ''
Goldmarie နှင့် Pechmarie
တစ်ချိန်ကသမီးနှစ်ယောက်ရှိသောမာရီယာအမည်ရှိသောလှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းဆရာရှိခဲ့သည်။ တစ်ယောက်ကအလုပ်ကြိုးစားသူ၊ တစ်နေ့ကျတော့အလုပ်ကြိုးစားတဲ့အမျိုးသမီးကရေတွင်းတစ်တွင်းကိုလာပြီး
'' သောက်စရာရေမရှိဘူး ''
ရေငတ်သူအမျိုးသမီးက '' တရားဝင်အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်ပဲရှိတာ။ ထိုမိန်းကလေးသည်ရေမှသောက်။ မတော်တဆရေတွင်းထဲသို့ကျသွားသောကြောင့်သူမသည်သတိလစ်သွားသည်။ တစ်ချိန်ချိန်သူမလုံးဝမသိသောinရိယာ၌နိုး။
ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်လိုအပ်နေသောအိမ်၏ပြတင်းပေါက်တွင်အမျိုးသမီးကြီးတစ် ဦး သည်ရပ်။ ခေါင်းအုံးကိုခါလိုက်သည်။ အိမ်ငှားသူဟုခေါ်သောမစ္စဟိုးလ်ကမိန်းကလေးအားဤသို့ပြောခဲ့သည် -“ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသောသူနာပြုများသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ရှားပါးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အတွက်များစွာအလုပ်များသည်။
သို့သော်ခဏကြာသော်မိန်းကလေးသည်အိမ်ပြန်လာပြီးအိမ်ပြန်ခွင့်ပြုလိုကြောင်းထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ Frau Holle ကသူမအားဤဆန္ဒကိုပေးခဲ့သည်။ မိန်းမကြီးကကောင်မလေးကိုသူမကိုဂိတ်တံခါးတစ်ခုသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်တံခါးဝသို့လျှောက်သွားစဉ်သူမအပေါ်အရေပြားပေါ်မှ dioxin-ညစ်ညမ်းသောအစေးပေါ်မှမိုးရွာနေသည်။ ကောင်မလေးက '' Fucking bullshit! ငါကံကြမ္မာအပေါ်ခါးစွာငါလက်စားချေလိမ့်မယ်။ သင်္ချာဘာသာရပ်ကိုလေ့လာပြီးဝိရောဓိသီအိုရီများကိုပါလေ့လာခဲ့သည်။
သူမ၏သမီးသည်အစေးဖြင့်လူးလာသည်ကိုမိခင်ဖြစ်သူတွေ့သောအခါသူမသည်ကလေး Pechmarie ဟုခေါ်သည်။ လူမှုရေးဆိုင်ရာလျော်ကြေးပေးရန်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ယခုအခါမိခင်ကသူမပျင်းရိသောသမီးကိုရေတွင်းသို့ပို့လိုက်သည်။ ဒါဟာအတူတူနီးပါးဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သူမရဲ့ဒုတိယသမီးကသာ Holle ရဲ့အိမ်အစားမိန်းမတစ်ယောက်နေတဲ့အခြားအိမ်သို့ရောက်လာသည်။
ဆယ်မိနစ်လောက်အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်ပျင်းရိသည့်မိန်းကလေး၏အလုပ်စည်းကမ်းသည်သိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်။ မစ္စဟယ်လ်က“ မင်းရဲ့အသက်အရွယ်မှာငါအရမ်းပျင်းရိတယ်။ ငါအလယ်တန်းကျောင်းထွက်လက်မှတ်မရှိဘူး။ အခုကျွန်မတို့သားလေးကသူ့ကိုယ်သူခိုးယူသွားတဲ့Château Mouton-Rothschild ကို ၁၉၄၅ ခုနှစ်ဆီ ဦး တည်ပြေးနေပြီ။
ကံကောင်းထောက်မစွာပင်မြေအောက်ခန်းတစ်ခုလုံးနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ '' တစ်ပတ်ကြာအရက်အလွန်အကျွံသောက်ပြီးနောက်တွင်ပျင်းရိသူသည်အိမ်သူအိမ်သားများကိုလွမ်းဆွတ်ပြီးအိမ်မှထွက်ခွာလိုကြသည်။ Frau Hölleကသူမကို Pechmarie ဖြတ်သန်းသွားသောတူညီသောတံခါးသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ပျင်းရိသောမိန်းမငယ်သည်မြို့တံခါးဝသို့ဝင်သောအခါသူမအပေါ်၌ရွှေမိုးရွာနေသည်။ အခုတော့မိန်းကလေးကပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရွှေကိုဖယ်ထုတ်လို့မရလို့ပဲ။ သူမအိမ်ပြန်ရောက်သောအခါသူမကိုသူမ၏မိခင်က Goldmarie ဟုခေါ်ခဲ့သည်။ ဘ ၀ ၏မမျှတမှုကိုဒေါသဖြင့်မိခင်ချာ့ချ်မှထွက်ခွာကာလောကတရားစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Pechmarie သည်သူမ၏မျက်နှာ၌ dioxin အမာရွတ်များနှင့်ပထမဆုံး logic ပါမောက္ခဖြစ်လာသည်။ သူမ၏ဘဝသည်လုံးဝပျက်ပြားသွားခဲ့သည်။ သို့သော် Goldmarie သည်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခဲ့သည်။ > ပျော်ရွှင်စရာဇာတ်သိမ်းခန်း
Wolfgang - ခင်ဗျားရဲ့သိုးတစ်ကောင်ကကျမကိုမွေးနေ့အတွက်စာအုပ်ပေးခဲ့တယ်။ ယင်း၏ခေါင်းစဉ်မှာသိုးချိစ်ကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပါ။
Wolfgang - ပြက်လုံးတွေကိုမလှည့်စားရဘူး။ ငါဘယ်တော့မှနောက်နေတာမဟုတ်ဘူး အကြင်သူသည်ရယ်တတ်၏။ ငါဘယ်တော့မှနောက်နေတာမဟုတ်ဘူး ပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုမှရယ်မောရင်ငါမြည်းကိုပါးစပ်ထဲထိုးတယ်။
သိုး - ကျွန်ုပ် ၀ င်စွက်ဖက်ပါကခွင့်တောင်းပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်မျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်စကားပြောနိုင်သည်။ မကြာခင်သိုးဒိန်ခဲအပေါ်အခွန်အသစ်ရှိလား
အခြားသိုး။ ငါသည်လည်းမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာတိုးတက်လာသောဖန်တီးသူဖြစ်ပြီး ၊ ငါဆိုသည်ကားအမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။
Shepherd: ဒီလိုရှုပ်ထွေးတဲ့စကားတွေကြောင့်ကျွန်တော်ခေါင်းမူးလာတယ်။ .. Ah, ဘယ်သူလာမလဲကြည့်! သူထော့နဲ့နေပြီ။
shorn သိုး: အဓိပ္ပာယ်ကိုအမြဲစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဟောပြောသူကသူ့မိန့်ခွန်းထဲမှာအလျင်အမြန်ကတိပေးခဲ့တယ်။ ဂျာမန်နှစ်ဆသည် Lapsus Freudianikus ဖြစ်ပြီးအလွန်ချောမွေ့သောမိမိကိုယ်ကိုပုံဖော်ခြင်းတွင်ပေါက်ကြားသည်။
သိုးထိန်း: သိုးလေ့လာခဲ့သည်။ Psycholinguistics သို့မဟုတ်တစ်ခုခု။
Limping: မင်းငါ့နောက်ကိုလိုက်နေတယ် ငါ့ခိုးယူကုန်သွယ်မှု
Shepherd: အော့တို၊ ကိစ္စမလုပ်နဲ့
သိုးထိန်း - သိုးအားလုံးလေ့လာခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါ။
အော့တို - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်း။
Wolfgang: ငါကအခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းရှိလိမ့်မယ်။ ငါဆပ်ကပ်မှာကောင်းတဲ့မှော်ဆရာကိုငါသိတယ်။ သူသည်ဓာတ်မတည့်မှုခံစားနေရသည်။
အော့တို - ငါနက္ခတ်ဗေဒင်ကိုမယုံဘူး!
အော့တို - ကောင်းပြီ၊ ငါစမ်းကြည့်ချင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဘာမှဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်ယုန်တစ်ကောင်၌စွဲစွဲလန်းလန်းရှိပြီး မည်သူမျှငါ့ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိစေရန်နောက်ပြန်နာမည်ကို ရေးပါ ။
သိုးထိန်း: အလွန်ကြီးစွာသောအရာ အခုတော့ဒါဟာတကယ့်ကိုပျော်ရွှင်စရာဇာတ်သိမ်းပါပဲ။
ထူးဆန်းတဲ့မျက်လုံး။ TNT မှာမဟုတ်ဘူး။
သင်သည်တောက်ပသောမျောက်တစ်ကောင် ဖြစ်၍ နိုဘယ်ဆုကိုခံထိုက်သည်။
(မျောက်ကဒိုင်းနမစ်၏ပါးလွှာသောမျက်လုံးကိုမြည်းထဲထည့်ပြီးဖျူးဖျော်ပေးသည်။ အာရုံစူးစိုက်မှုကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်ပေါက်ကွဲမှု၏တည်နေရာကိုဖုန်မှုန့်များ၊ အပျက်အစီးများနှင့်အသားအကြွင်းအကျန်များကအကြမ်းဖျင်းပေါက်ကွဲစေနိုင်သည်။ )
တစ်ချိန်ကပျော့ပျောင်းသောနူးညံ့သောသဘာဝကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသော squeaky ကားငယ်တစ်စီးရှိ၏။ လှည်းသည်မြင်းဖြင့်ဆွဲသည်။ ယနေ့ကားမောင်းသောမော်တော်ယာဉ်။ အဖော်ကိုမော်တာဖြင့်စတင်မောင်းနှင်သည့်အခါတွန်းလှည်းသည်သံမဏိဖြစ်လာသည်၊ တွန်းလှည်းကိုဆွဲယူနေစဉ်၊ ပန်းများပွင့်လာပြီးရေတဟုန်ထိုးတက်လာသည်။ ဘဝ၏လျှို့ဝှက်ချက်သည်ကြိတ်စက်ဘီး၌နေ ခဲ့၍ ဤနေရာတွင်ဘီးသည်ရေထဲသို့စီးဆင်းသွားခဲ့သည်။ အဆိုပါမော်တော်ကားသံမဏိမိန်းကလေးမွေးဖွားခဲ့သည်။ ကောင်းကင်ကဆန့်တယ်၊ သံမဏိကြက်များသည်ကာကွယ်ရေးအမြောက်များဖြင့်ကောင်းကင်သို့ပစ်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်သည်သံမဏိကြိုးမဲ့ကြိုးမဲ့ကြိုးဖြင့်ပြန်လည်မောင်းနှင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သံမဏိကြက်သည်မြင်းတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်မြင်းနီကိုဝတ်သည်။ မြင်းတွေကတကယ့်ကိုကြော့ရှင်းတယ်သငျသညျမရှိတော့သံမဏိ၏ခေတ်၌ကြော့ရှင်းကိုသိအဖြစ်။ ပလတ်စတစ်သည်သံမဏိဖြစ်သည်။ မြင်းအားဖြင့်ဆွဲထုတ်မထားအရာအားလုံးသံမဏိဖြစ်ပါတယ်။ မင်းကဖက်ရှင်အရုပ်မဟုတ်တဲ့လှပမှုကိုသင်ကြောက်ရွံ့တယ်။
အခန်းတစ်ခန်းပါ ၀ င်သည်အခန်းအပြင်ဘက်ထက် ပို၍ ကြီးသောအခန်းဖြစ်သည်။ Multi-cupboard သည်ဥပမာ၊ သာမန်အိပ်ခန်းဗီရိုနှင့်တူသည်။ လိုအပ်ပါကဗီရို၌ဝှက်ရန်လိုပါကဗီရိုထဲတွင်နဂါးငွေ့တန်းတစ်ခုလုံးရှိသည်ကိုတွေ့ရ။ သင်အံ့သြသွားပါလိမ့်မည်။ အောက်စီဂျင်ကင်းမဲ့မှုကြောင့်၎င်းသည်အာရုံစူးစိုက်မှုမဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာကြီးသည်အမှန်တကယ်တွင်တွင်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ထိုအပို။ ပို။ ရှိပါတယ်။
အန္တရာယ်ကမင်းကိုခြိမ်းခြောက်နေတယ်။ ဒီမတော်တဆမှုဟာမပြီးသေးပါဘူး ဒါပေမယ့်အနာဂတ်မှာဒဏ်ခတ်နိုင်; အန္တရာယ်တစ်ခုပါပဲ ဘဝဟာမလုံခြုံဘူး လာမယ့်အခိုက်အတန့်မှာဘဝပြိုကွဲမည်ကိုသင်မသိပါဘူး။ အန္တရာယ်များသည်တံခါးဝတွင်ရောက်ရှိနေသည်၊ အန္တရာယ်သည်ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ မရနိုင်ပါ၊ ၎င်းသည်အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။ သားကောင်များအန္တရာယ်ရှိပါ၏ အရင်းရှင်များလည်းဖြစ်သည်။ ပါဝါကေဘယ်လ်များကိုရေနှင့်ပြည့်သောစည်ပိုင်းတွင်ထားရန်အန္တရာယ်ရှိသည်။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းသည်အန္တရာယ်များသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အသက်အာမခံကအကာအကွယ်ပေးမည်ဟုကတိပေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဘဝတစ်ခုကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရလျှင်အသစ်တစ်ခုကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်အာမခံလိမ်လည်မှုကိုသတိပြုပါ။ အာမခံကုမ္ပဏီများသည်လိမ်လည်လှည့်စားကြသည်။
စဉ်းစားအဓိပ္ပာယ်၏ပြည်၌လှည့်လည်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံနည်းလမ်းများသည်ဗဟုသုတတောအုပ်သို့ရောက်သွားသည်။ သူ၏တိုးမြှင့်ခြင်းသည်အတွေးအခေါ်ကိုပိုမိုခက်ခဲစေပြီးနောက်ဆုံးတွင်သူ၏အတွေးသစ်ပင်များနှင့်သူ၏အိပ်မက်နှင်းများနှင့်ပေါင်းစည်းသွားသည်။
Olympus မှဆဲလ်ဖုန်းမှနတ်ဘုရားကို Fred မြင်သည်
ဘုရားသခင်၊ ဟုတ်တယ်၊ ငါနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်လည်းတယ်လီဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်သော်လည်း၊ ငါတို့ဘုရားများသည်လူတို့အားနားလည်စေလိုသည်။
ဦး နှောက် wizards pneumatic agglation ၏ယုန်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကိုဥဥခေါင်းများဟုလည်းခေါ်ကြသည်။ သင်၏အာရုံကြောဆဲလ်များသည်အလွန်ပျော့ပျောင်းလွန်းသည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အလွန်ရှည်လျားသည်။ သူတို့ရဲ့ခေါင်းပြောင်တဲ့ခေါင်းပေါ်မှာ walnuts တွေကိုချပစ်ပါ၊ Neurolants စိတ်ကို၏လှံတံဖြစ်ကြသည်။ Neurolants သည်သစ်ပင်များ၏ပင်စည်များဖြစ်နိုင်ပြီး၎င်းမှတစ်ဆင့်သင့်အားသစ်တောအရေအတွက်များပြားစွာဖြင့်သစ်တောများကိုသင်မမြင်နိုင်တော့ပါ။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ Neurolanten ဟာဉာဏ်ရည်မြင့်ဆူရှီတွေစားဖို့အတွက်သောက်စရာတွေပါ။
အချို့သော ဦး နှောက်လှိုင်းများကိုအတွေးအခေါ်ပညာရှင်များဟုခေါ်ကြသည်။ အတွေးအခေါ်သည်အရက်သောက်ခြင်းမရှိဘဲ၊ အချစ်မရှိဘဲအလင်းဖြစ်သည်။ အသိပညာ၏သဲကန္တာရ၌, တွေးခေါ်ဆိုးရွားစွာဟာသနိုင်ပါတယ်။ Cacti ဘယ်တော့မှရယ်မော။ ဒနသည်ဒိန်ခဲဟောင်းကဲ့သို့ခက်ခဲသည်။ အနာရောဂါငြိမ်းစရာလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိအတွေးအခေါ်ပညာရှင်များသည်ကဗျာများကိုစတင်ရေးသားနေကြသည်။
Fred: Detlef ဆိုတာမင်းသိတယ်။ ငါဘုရားကိုရာထူးတိုးမြှင့်ပေးလိုက်တယ်။
Fred: ဒါကပဲ! ငါမတိကျစွာသာလျှင်, မေးခွန်းတိုင်းကိုအဖြေရှာတွေ့ပေမယ့်ငါအဖြေရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
Fred: ကျွန်ုပ်သည်လူဆိတ်ဆိတ်သောဘုရားဖြစ်သည်။ ငါမသေနိုင်သေးသေးဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုငါလုပ်နေတယ်။
Detlef: Mm ။
Fred: သူမဟာစည်းလုံးမှုကိုတောင့်တခဲ့တယ်၊ ငှက်ပျောသီးကပရဒိသုကိုပြန်သွားချင်တယ်၊ သူမစက်ဝိုင်းဖြစ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ကျဆုံးခြင်းကသူမကိုတားမြစ်ထားပြီး၊
'ဝိညာဉ်' ဟူသောဝေါဟာရသည်အလွန်အထီးကျန်သောစကားလုံးဖြစ်သည်။ အဆိုပါစကားလုံးဤမျှလောက်များစွာသောအရာတို့ကိုရှင်းပြဖို့ရှိပါတယ်။ ထောက်လှမ်းရေးသည်ကျောက်တုံးများကိုခုတ်ထွင်သည်။ စိတ်ကိုဆက်သွယ်တယ်။ ၀ ိညာဉ်သည်ကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုနေကဲ့သို့အလင်း ပေး၍ ပုံသဏ္givesာန်ပေးသည်။ စိတ်ဟာအရာတွေအတွက်ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။ စိတ်သည် ပို၍ သေးငယ်သောအမှုန်များကိုဆင်တူသည်။ စိတ်ကစဉ်းစားနိုင်သည်၊ ဉာဏ်ရည်ကသာစဉ်းစားနိုင်သည်၊ ပေါင်းနိုင်သည်။
ဘိလိယက်ကစားသမားတစ် ဦး သည်ဘောလုံးကိုသူ၏တုတ်ဖြင့်ရိုက်သည်၊ တစ်ဖန်အခြားဘောလုံးကိုရိုက်သည်။ အကြောင်းအရင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစဉ်းစားခြင်းသည်သိပ္ပံပညာ၏အခြေခံကျသောယုတ္တိဗေဒဖြစ်သည်။ ယုတ္တိဗေဒကတရားမျှတတယ်၊ ဘာမှမရှင်းပြဘူး။ ဘိလိယက်ကစားသမား၏လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုဤကမ္ဘာကြီးအမြင်တွင်လုံးဝဖုံးကွယ်ထားသည်။ အကြောင်းရင်းများမှာမှိုင်းနေသောတိရိစ္ဆာန်များဖြစ်ပြီး၊ အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲစွမ်းအင်မှတဆင့်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းသည်။
Fred: ငါယုတ္တိဗေဒယုံကြည်ပါတယ်။ cosာတစ်ခုလုံးသည်ယုတ္တိနည်းကျစွာဖွဲ့စည်းထားသည်။ သို့သော်အမျိုးသမီးများသည်စကြ ၀ ofာတွင်မပါ ၀ င်ပါ။ ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ဆိုင်သောစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကသင့်အားပဟေeveryိတိုင်းကိုရစေသည် သင်ရုံစဉ်းစားတွေးခေါ်သို့အားထုတ်မှုတွေအများကြီးထားရန်ရှိသည်။
Arnold Heitermann: Logic ကအသိပညာကိုတိုးမပေးပါဘူး။ ဥပမာတစ်ခု - ခြံစည်းရိုးမှာကျီးကန်းသုံးကောင်ရှိတယ်။ ငှက်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကလာပြီးငှက်တစ်ကောင်ကိုပစ်လိုက်တယ်။
Fred: ခြံစည်းရိုးမှာကျီးကန်း ၂ ယောက်ရှိတယ်။
အာနိုး - မှားတယ်။ ခြံစည်းရိုးမှာကျီးကန်းရှိနေသေးတယ်။
အာနိုး - ဒါဆင်ခြင်တုံတရားပါ။ သေနတ်ဖြင့်ပစ်ထားသောငှက်သည်မြေပေါ်သို့လဲကျသွားသည်။ ဒုတိယကျီးကန်းသည်ကျယ်လောင်သောပေါက်ကွဲသံကြောင့်တုန်လှုပ်သွားပြီးချက်ချင်းထွက်ပြေးသွားသည်။ တတိယကျီးကန်းသည်ပေါက်ကွဲသံကြောင့်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ကာထိုင်နေသည့်တစ်ခုတည်းသောငှက်ဖြစ်နေသည်။
အာနိုး - ကောင်းပြီ၊ အရာအားလုံးကိုရှင်းပြပြီး logic နဲ့ဘာမှမရှင်းပြနိုင်ဘူး။
အာနိုး - ဟုတ်ကဲ့၊
Fred: တကယ်ကိုကြီးကျယ်တယ်၊ ယုတ္တိရှိတယ်။
အာနိုး - အရာအားလုံးကိုယုတ္တိဗေဒ၊ ယုတ္တိမတန်ပဲရှင်းပြနိုင်တယ်။
Fred: Man၊ လူ၊ ငါဒါကိုတကယ်စဉ်းစားရမယ်။
အာနိုး - ဒါပေမယ့်သေချာအောင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါ။
Fred: အမ် ... ဟုတ်တယ် ... ဒါ ...
ဆိုကရေးတီး: ဒီနေ့မနက်မှာပလေတို၊ မင်းဟာ shit နဲ့ဘယ်လိုတူလဲ။
ပလေတို - မြည်း၊
ကျည်ဆန်သည်သူ့ဟာသူအလွန်ဆိုးရွားသည်။ အကယ်၍ မီးလောင်ကျွမ်းပါကကလေးမွေးလိုသည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှသူတို့ကိုမလောင်ကျွမ်းဘူး ဘောလုံးသည်ရွှံ့များကဲ့သို့မှိုင်းနေပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မသိရပါ။ ဘာကြောင့်ဘောလုံးတွေလှိမ့်သလဲ သူတို့ကလမ်းကိုလှိမ့်ထားပေမယ့်သူတို့ရဲ့ပုံသဏ္changeာန်မပြောင်းပါဘူး။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းတို့အားလှုပ်ရှားမှုမှလွှဲပြောင်းပေးလိုက်သည်။ ကျည်ဆံသည်ကျည်ဆံဖြစ်သည်။ ယခုငါမှတ်မိသည် - ကျည်ဆံများသည်အမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။
ခွေးကိုယ်နှိုက်သည်ခွေးတစ်ကောင်၏စိတ်ကူးဖြစ်သည်။ ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့စိတ်ကူးဟာ dachshund, gold retriever, sheepdog, poodle နဲ့တူလား။ စက်ဝိုင်းကိုယ်နှိုက်ကဘယ်လိုပုံလဲဆိုတာငါတို့သိတယ်။ စက်ဝုိင်းတစ်ခုသာရှိပြီး၎င်းသည်လုံးဝပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသည်။ တြိဂံတွေကအဲဒါကိုပိုပြီးခက်ခဲအောင်လုပ်ပြီးပြီ။ တြိဂံတစ်ခုရဲ့အယူအဆကဘာလဲ။ စက်ဝုိင်းတစ်ခုတည်းကိုသာတိကျစွာရေးဆွဲနိုင်သည်။ သင်ဟာခွေးတစ်ကောင်ကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ခွေးတစ်ကောင်တည်းသာဆွဲလို့မရဘူး။ စက်ဝိုင်းကိုယ်နှိုက်ကိုရေးဆွဲနိုင်ပါတယ်။ ငါတို့စက်ဝိုင်းကိုဝတ်ပြုသင့်သလား။ "သူ့ဟာသူ" မဆိုရှိပါသလား အမှုအရာသာငါ့အဘို့ပေါ်လာ? - အဖြစ်မှန်၌စုံလင်ခြင်းသည်ဘဝအတွက်မစုံလင်ပါ။ ဘ ၀ သည်စက်ဝိုင်းတွင်းထောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်စတုရန်းတွင်းအပေါက်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောစိတ်ကူးတစ်ခုအနေဖြင့်သာတည်ရှိသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဖြစ်မှန်မှာစုံလင်ခြင်းဆိုတာမတည်ရှိနိုင်ဘူး။ စက်ဝိုင်းသည်ဘဝ၏ပြီးပြည့်စုံမှုအတွက်ထောင့်များရှိသည်။ တစ် ဦး ကသစ်အယ်သီးတစ်ထောင့်ဘောလုံးကိုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာအဖြစ်မစုံလင်သောစုံလင်ခြင်း၌အကျိုးပြုသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သစ်အယ်သီးသစ်ပင်တစ်နည်းနည်းနဲ့နေမကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ထိုအရာကို hedgehog မှသာသိသည်။
စက်ဝိုင်းတစ်ခုမရှူနိုင်ပါ။ သူရှူရှိုက်နိုင်သောအပေါက်တစ်ခုမျှမရှိပါ။ စက်ဝိုင်းကိုယ်နှိုက်ကိုအပေါက်တစ်ခုအဖြစ်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ စက်ဝိုင်းသည်အခြားကမ္ဘာသို့တံခါးပေါက်လား? စက်ဝိုင်းကငါ့ကို ၀ င်ခွင့်မပေးလို့အဲဒါကိုငါမစစ်ဆေးနိုင်ဘူး။ ဒီဟာအရမ်းနီးနေပြီ ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးအစားများနှင့်မဆက်ဆံသင့်ပါ။ စက်ဝိုင်းကငါ့ကိုစကားမပြောတော့ဘူး၊ စက်ဝိုင်းသည်ဖုံးကွယ်စရာဘာမှမရှိပါ၊ - ပတ်ပတ်လည်သည်စက်ဝိုင်း၏အရောင်ဖြစ်သည်။ ဒီအရောင်ဟာအလွန်ရှားပါးပြီးနာမည်မရှိပါဘူး အရောင်ဖော်ပြရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာ 'ရောင်စုံ' ဖြစ်သည်။ ပတ်ပတ်လည်နှင့်စက်ဝိုင်းမပါဘဲစွန့်စားမှုအပေါ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဘဝကိုယ်နှိုက်သည်စွန့်စားခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ပတ်ပတ်လည်ဒါဟောင်းသည်အသစ်ကသူ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ရူးလာအောင်ဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ဖိလစ်ပိုင်သည်ဘယ်တော့မှပတ်ပတ်လည်တွင်တွယ်ကပ်နေတတ်သည်။ အဲဒါအတွက်အရမ်းများလွန်းတယ် အုပ်စုသည်စက်ဝိုင်းဖြစ်လို။ သင်တန်းစင်တာအားသင်တန်းတက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ စာရေးတစ် ဦး စတုရန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆိုးဆိုးရွားရွားအဆုံးသတ်သွားတယ်
ဒီကဗျာဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအသုံးအများဆုံးကြိယာဖြစ်တယ်။ နှိပ်တကယ်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်၏။ ဤလှုပ်ရှားမှုသည်ကျောက်ခေတ်တွင်အပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်သည်။ သင်၏မျက်လုံးများကိုဖွင့်နိုင်သည်။ duden ကိုဖွင့်ကြည့်၊ ပြတင်းပေါက်ကိုရိုက်ခိုင်းပါ။ ဂီတသမားများသည်ဗုံသံဖြင့်ဆူညံသံကိုပြုလုပ်ကြသည်။ သင့်ကိုထိုးနှက်ချက် အဆိုပါ 1.FC meniscus အဆိုပါ Rosenheim ပြားချပ်ချပ်ပေ 2-1 beats ။ ရိုက်သောသူသည်နိုင်၏။ ဝင်တိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ကျောက်တုံးများဖြင့်ဖြစ်သည်။ ကျောက်မျက်ကိုသံတူဟုခေါ်သည်။ ရိုက်ခြင်းမှာအကြမ်းအားဖြင့်ကြမ်းတမ်းသည်။ တစ် ဦး ကထိုးနှက်အသိဉာဏ်မရှိသောနှင့်အနုမြူဗုံးဖြစ်ပါတယ်။ ရိုက်နှက်ခြင်း၊ ချိုးခြင်း၊ ခွဲခြင်းကိုရိုက်ခြင်း။ နှိပ်တဲ့ကလေးကဖြတ်တောက်နေတယ်။ ကလေးဆိုး နောက်ထပ်ထိသောကလေးကထိုးသည်။ ဒီကလေးကပိုပြီးနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကရှေ့ကိုပိုပြီးနေလို့ပါ။ ရိုက်နှက်ခြင်းသည်လက်သီးတစ်လုံးဖြစ်စေသည်၊
အနုပညာလက်ရာများသည်လူ့အတွေ့အကြုံအားလုံး၏အစစ်ခံချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အနုပညာလက်ရာတစ်ခုအဖြစ်ခိုင်မာစေရန်အတွက်အတည်ပြုပြီးသောအတွေ့အကြုံရှိသည်။ အဆိုပါအလုပ်ဘဏ္asureာကိုဝိညာဏကနေသံလိုက်စက်ကွင်းကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောသတ္တဝါတွေကို orientates ။ Werkschatz သည်သဘာဝ၏ဝီကီပီးဒီးယားဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲဗဟုသုတရတနာသုံးပါးတွင်သိုးနက်များလည်းရှိသည်။ သူတို့ကိုစက်ရုံအမှိုက်ဟုခေါ်သည်။
ဘုရင် Orthos အတွက်အုပ်ချုပ်မှုဆိုသည်မှာအရာဝတ္ထုများကိုသူတို့၏အတွင်းသဘောနှင့်အညီစီစဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။ Orthos သည်လူတို့အားကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒမပေးပါ။ ဘုရင်သည်အရာရာကိုအတင်းအကျပ်မပြုမူလိုပါ၊ လူများ၊ ဆိတ်များနှင့်အခြားသတ္တ ၀ ါများသည် Orthos Reich တွင်နေထိုင်ကြပြီးအားလုံးသည်သူတို့နေရာမှန်၌သာလမ်းလျှောက်နေကြသည်။ သူကွယ်လွန်ပြီးနောက်တွင်ဘုရင် Orthos သည်သူအကြိုက်ဆုံးမြစ်၏ရေထဲသို့စီးဆင်းသွားပြီးနောက်ဆုံးတွင်ပင်လယ်ထဲသို့စီးကျသွားသည်။ ပင်လယ်မှ, သူ့အလုပ်ကလူကို ဦး တည်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
ငတ်မွတ်မှုဟာတစ်ချိန်လုံးတစ်ခုခုစားချင်တယ်။ ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းသည်သူ၏ဆန္ဒနှင့်ဆိုင်သောအရာများအပေါ်တွင်လုံးလုံးမှီခိုနေရသည်။ သို့သော်ထိုအရာသည်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းကိုအတိအကျဖြစ်စေသည်။ သူသည်ဘ ၀ နှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးအချို့ကသူသည်သူ့ဘဝပင်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကြသည်။ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုတွင်ညီမတစ်ယောက်လည်းရှိသည် - သူမ၏အမည်မှာ "ရေငတ်" သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်အရူးအမျိုးအစားများအတွက်သာဖြစ်သည်။
ငတ်မွတ်မှုနှင့်ရေငတ်မှုသည်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ လိုအပ်ချက်ကဆင်းရဲတယ်။ လိုအပ်ချက်သည်အလွန်လောကနှင့်အမြဲတမ်းတူညီသောမီးခိုးရောင်ဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုမည်သည့်အပူချိန်တွင်မဆိုသိုလှောင်နိုင်သည်။ ဘယ်တော့မှအသီးမသီးနိုင်ဘူး၊ အဘယ်သူသည်အဘယ်အရာလိုအပ်ပါတယ်စျေးဝယ်သွား။
အမျှင်ဓာတ်လိုအပ်သူ အားလုံးအထက်, သူတို့သာ ballast ထားရှိရေးလျှင်။ ဝန် Filler ။ သူတို့ကပျက်ပြယ်ဖြည့်ပေမယ့်သူတို့ကိုယ်သူတို့ဆွန်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာတောက်ပသောအနှစ်သာရဖြစ်ပါတယ်။
ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုအနေနှင့်ရေခဲစွမ်းအင်သည်သူမ၏လက်မောင်းကိုမြှင့်တင်ခဲ့သည်။ အေးသောမျက်နှာမှရေလှေကားတစ်စင်းပြုတ်ကျသွားသည်။ အရိပ်အမျိုးသမီး၏မျက်လုံးများသည်ညအချိန်တွင်နေရောင်နှစ်ခုကဲ့သို့တောက်ပနေသည်။ သိပ်မကြာဘူး သင်၏မီးခွက်သည်သေပြီ။ အရိပ်မိန်းမသည်အနက်ရောင်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးအဖြစ်ကောင်းကင်သို့ပျံသန်းသည်။ မသိသောနေရာသည်မိဘမဲ့ကလေးဖြစ်သည်။ မည်သူမျှမရှိသည့်နေရာ၊ ယခုတွင်မည်သူမျှမရှိပါ။ ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းငါ့အသိပညာဗလာအာကာသမှလာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါနွေးပေမယ့်အပူအဖြစ်သာငါ၌အခြားခန္ဓာကိုယ်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လျှာမရှိဘဲအော်ဟစ်သောအသံသည်ဗလာအခန်းထဲတွင်အလွန်ဆိုးရွားသွားသည်။ နေရာတိုင်းတွင်အချည်းနှီးသာရှိသည်၊ နေရာတစုံတခုရှိသင့်သည်။ ဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာဘာမှမမြင်ရတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေတာကိုတွေ့တော့ဘာကြောင့်လဲမသိဘူး။
တစ် ဦး ကအပေါက်တစ် ဦး မဟုတ်ဘဲပတ်ပတ်လည်မရှိခြင်းဖော်ပြသည်။ တွင်းတွေကဗလာ အပေါက်တစ်ပေါက်သည်မကြာခဏ ၀ င်ထွက်ထွက်သွားသောကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံမြင်ကွင်းသည်အပေါက်မှတဆင့်ထွက်သွားသည်။ တွင်းတွေကဆာနေတယ်။ အားလုံးဖြစ်လျက်ရှိ၏တိုက်တွန်းကျေနပ်မှုခံရဖို့ကောင်းလှ၏။ အဖြစ်မှန်တွင်းရှိပါတယ်။ ဤအရာသည်အလွန်ပွင့်လင်းမြင်သာသောကြောင့်မည်သူမျှမမြင်နိုင်ပါ၊ ရူပဗေဒပညာရှင်ပင်လျှင်သူ၏ကြီးမားသောကိရိယာများဖြင့်ပင်။ အဝတ်မရှိခြင်းကိုအဝတ်အချည်းစည်းရှိသူများတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကွာဟမှု၏မရှိခြင်း, ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းနှင့်မမြင်ရတဲ့နေဆဲဖြစ်သည်။ Surface ကအလွတ်ဖြစ်နေတယ်။ အကယ်၍ ဒီအချည်းနှီးဖြစ်သွားလျှင်မျက်နှာပြင်သည်လျင်မြန်စွာပျောက်ကွယ်သွားပြီးပါးလွှာလာသည်။ esthete သည်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုမိုရရှိစေရန်အတွက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အရောင်ကိုသတ်မှတ်သည်။
ဂန္ဓ ၀ င်သတ္တ ၀ ါတွင်ခြေလေးချောင်း၊ တိရိစ္ဆာန်ဟူသောဝေါဟာရသည်တူညီမှုနည်းပါးသောသတ္တဝါများစွာအတွက်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိရစ္ဆာန်များအရွက်များသယ်ဆောင်။ အက်တမ်ဗုံးများမတည်ဆောက်နိုင်ပါ။ တိရိစ္ဆာန်များနောက်ပြန်လူဖြစ်ကြ၏။ သို့သော်တနေ့တိရိစ္ဆာန်များသည် Godel ၏မပြည့်စုံမှုသီအိုရီကိုလည်းနားလည်ကြလိမ့်မည်။ - ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့လဲ
သဘာဝသည်ကုန်ကြမ်းနှင့်ကြမ်းတမ်းနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်သူများ၏သဘောသဘာဝလည်းရှိသည် - ဤသဘောသဘာဝသည်မကျဆုံးမီပင်လူတို့၏ပရဒိသုဖြစ်သည်။ ဂျာမန်ချားလ်စ်ဒါဝင်၏သဘောသဘာဝမှာဤကဲ့သို့သောအင်အားကြီးသူရဲကောင်းတစ် ဦး ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုတိယသဘာဝမှာယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တတိယနေရာကိုအတုဟုခေါ်သည်။ ဘယ်သူမှအဲဒီမှာနေဖို့မကြိုက်ဘူး။
ဆွီဒင်မှနိုင်ငံခြားစွမ်းအင်သည်အအေးဆုံးရေခဲနှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဒီစွမ်းအားဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ Eisblume လို့ခေါ်တဲ့မိန်းကလေးအဟောင်းလိုပုံစံမျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။ ရေခဲနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပန်းတစ်ပွင့်၊ ဤအချိန်ကာလအတွင်းလတ်ဆတ်သောပန်းပွင့်များသောအားဖြင့်ငယ်ရွယ်နွေးထွေးမှုအတွက်ပွင့်သောကြောင့်, ပန်းပွင့်, နွေ ဦး ရာသီ၏ဆင်တူသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ရေခဲပွင့်သည်ဆောင်းတွင်းရာသီဥတုဆိုးရွားသည့်အချိန်တွင်ပွင့်လန်းသည်။ ရေခဲနှင့်ပြုလုပ်သောအခြားလူများအားလုံးကိုရေပန်းဖြင့်ဆွဲဆောင်သည်။ Agnis သည်အေးခဲနေသော၊ ရေခဲတောင်မှလည်းဖြစ်သည်။ Agnis သည်ရေခဲပန်းကိုမြင်။ ၀ မ်းသာသည်။ အအေးခန်းများသည်အပူဆုံးဖြစ်သည်။ Mr. Sumpfstein သည်ရေခဲမုန့်ရောင်းသူဖြစ်သည်။ သူ၏ရေခဲပြင်ဘောလုံးများတွင်ပေါက်ကွဲမှုများပါ ၀ င်ပြီးသူသည်တောင်များပေါ်တွင်ကြာမြင့်စွာကတည်းကပါဝင်ခဲ့သည်။ Eisblume က Mr. Sumpfstein ကိုမြင်တယ်။ သူမထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်။အဆိုပါကစားတဲ့ဘောလုံးကိုသူမ၏ ဦး ခေါင်း၌လှိမ့်နေသည်။ ဘောလုံးသည် (၁၇) ခု၏အခန်းတွင်ရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်ဟုမည်သူမျှမသိ။ Agnis မှာသုံးလုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။ ရေခဲဘောလုံး (သို့) ကစားတဲ့ဘောလုံး၊ ဘောလုံးအားလုံးအတူတူပါပဲ။ ကျည်ဆံများသည်ကံကြမ္မာဆိုးဖြစ်သည်။ အခုငါတို့ဘဏ်ထဲကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လိုက်ပြီးရူးသွပ်ခြင်းကိုလွတ်မြောက်လိုက်တယ်။ လူတိုင်းရူးသွားကြပြီ။ Eisblume, Agnis နှင့် Herr Sumpfstein ။ သငျသညျစိတ္တဇကိုရှူရှိုက်: အာ, ထိုကောင်းလှ၏။ နောက်ဆုံးတော့သူတို့အခမဲ့ဖြစ်သည်။Agnis နှင့် Mr. Sumpfstein တို့သည်အကွက်တစ်ခုစီတွင်ရှိသည်။ သငျသညျစိတ္တဇကိုရှူရှိုက်: Ah, ကောင်းတယ်။ နောက်ဆုံးတော့သူတို့အခမဲ့ဖြစ်သည်။Agnis နှင့် Mr. Sumpfstein တို့သည်အကွက်တစ်ခုစီတွင်ရှိသည်။ သငျသညျစိတ္တဇကိုရှူရှိုက်: Ah, ကောင်းတယ်။ နောက်ဆုံးတော့သူတို့အခမဲ့ဖြစ်သည်။
အတွင်းရှိသွေးသည်အထူနှင့်အားကောင်းသောအပူအဖြစ်စီးဆင်းသည်။ လူ့သွေးသည်၎င်း၏သွေးပြန်ကြောများအတွင်းသို့ ၀ င်နေသမျှကာလပတ်လုံးအလွန်အရေးကြီးသည်။ သွေးပတ်ပတ်လည်ကဒါပတ်ပတ်လည်ပါပဲ မိမိအစက်ဝိုင်းထဲမှာသွေးစွမ်းအား။ အအေးနှင့်အကြင်နာကင်းမဲ့သည့်ဆရာဝန်၏ဆေးထိုးအပ်ပြင်ပသွေးသည်သေနေပြီဖြစ်သည်။ တွားသွားသတ္တဝါများသာအအေးမိသည်။ တွားသွားစိမ်း၏သားမွေးပေါ်တွင်နေမထွန်းလင်းဘဲနေလျှင်။ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တိုင်းသည်သိလိမ့်မည်။ လသည်ထွန်းလင်းသောအခါသွေးသည်အနက်ရောင်ဖြစ်သည်။ နေ့တစ်နေ့တာမှာဘာမှမမြင်ရ
မီးသည်ပြင်းထန်သောမီးတောက်များဖြင့်ကခုန်နေသည်။ တောမီးလောင်ခြင်းသည်လောင်စာ၏ကြာရှည်ခံမှုကိုထိခိုက်စေသည်။ အပူရှိန်ကအခန်းထဲသို့ ၀ င်လာပြီးဖျားနာနေသည့်အံသွားများကိုက်လာသည်။ မုန်တိုင်းနီ၏စွမ်းအားသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပူနွေးစေသည် မီးရဲ့မီးခိုးတွေကပြာထဲကိုကျသွားတယ်။ မီးသည်အထင်ကြီးဖွယ်ကောင်းသော်လည်း၎င်း၏ပစ္စည်းများကိုလောင်စာဆီမှရယူနိုင်သည်။ သူ၏အစာသည်ချက်ခြင်းထက်မြန်သည်၊ မြန်သည်။ မီး၏နွေးထွေးမှုသည်မသေနိုင်သည့်နေရာ၌ပျံ့နှံ့နေသည်။ အပူအရူးသွားသည့်အခါအပူဖြစ်လာသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်လိုအပ်သလောက်မျက်နှာကိုပြသသည်။ အထူးပြအများကြီးရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအနား။ အထွေထွေနေရာတိုင်းအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, ကမကြာခဏအတူတူမှတဆင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ အရာအားလုံး၏ရှုခင်းတွင်ယေဘူယျအားနေရာတိုင်းတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်၏မီးခိုးရောင် ဦး လေးကိုပျမ်းမျှဟုခေါ်သည်။ ယေဘူယျသည်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသောအထူးနှင့်အကြိမ်ကြိမ်ညှိရန်လိုသည်။ သင်ပုံမှန်မဟုတ်သောအားလပ်ရက်ခရီးထွက်သောအခါယေဘူယျအားဖြင့်လုံခြုံမှုရှိသည်။
ရပ်နေသည့်အရိပ်သည်အမြဲတမ်းရပ်တန့်ရမည်၊ ရပ်နေသောအရိပ်သည်ရွေ့ချင်သည်ဆိုပါကသူ့အစားပတ်ဝန်းကျင်သည်သူ့အားလှည့်ပတ်သွားလိမ့်မည်၊ မတ်တပ်ရပ်နေသောအရိပ်သည်ရွေ့လျား။ တူညီသောနေရာ၌အမြဲနေရန်လိုအပ်သည်။ ရပ်နေသောအရိပ်တွင်ကုမ္ပဏီမရှိပါ။ ဟုတ်ပါတယ်တခြားရပ်နေတဲ့အရိပ်တွေလည်းရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကတခြားနေရာတွေမှာရှိတယ်။
ဤလမ်းကြောင်းသည်ပန်းတိုင်ဆီသို့ ဦး တည်နေသမျှကာလပတ်လုံးမည်သည့် esoteric မှလမ်းလျှောက်ခြင်းမရှိပါက တိုတောင်းသောဆားကစ်သည်ဘဝလမ်းစဉ်ကိုတိုစေသည်။ သူသည်မတည်ရှိသောလမ်းကိုလျှင်မြန်စွာလိုက်လျှောက်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်သူ၌အတွေ့အကြုံမရှိခြင်း ၎င်း၏အောင်မြင်မှုမှာပူ။ အချည်းနှီးဖြစ်ပြီးအသားမရှိဘဲတိုတောင်းသောဆားကစ်သည်သြဇာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အတိုဆုံးလမ်းကြောင်းသည်အမြဲတမ်းတိုတောင်းသော circuit တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်း၏ရည်မှန်းချက်မှာမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ Short circuit သည်ကြီးထွားမှုမရှိဘဲလုပ်ဆောင်သည်၊ ၎င်းသည်လမ်းကြောင်းမရှိဘဲသွားသည်။ Joachim Ernst Berendt က '' လမ်းမရှိ၊ သွားပါမယ်။ သဘာဝမှာ BE '' စာအုပ်ကိုရေးခဲ့သည်။ သူ့စာအုပ်တင်ဆက်မှုကိုလမ်းတွင်ကားတစ်စီးဝင်တိုက်ခံခဲ့ရသည်။
လမ်းလျှောက်သွားတဲ့အခါသင်ကြောက်မိမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လမ်းလျှောက်ရတာအရမ်းကောင်းတယ်။ အမြဲတမ်းဟန်ချက်ညီနေတယ်။ စင်္ကြံအတွင်းရွေ့လျား။ သို့သော်လိမ်ပြောခြင်းသည်ဘယ်တော့မှမ
တောင်တန်းများသည်ပြproblemsနာမရှိပါ၊ ၎င်းတို့သည်ကြီးမားပြီးကြီးမားသောကြောင့်ပျော်ရွှင်ကြသည်။ တောင်ပေါ်မှ visitors ည့်သည်များကိုလက်ခံသည့်အခါကောင်းကင်ဘုံသည်လည်းပျော်ရွှင်သည်။ မိုsky်းကောင်းကင်ကြီးသည်လည်းအဆင်သင့်လိုအပ်သည်။
အကြောင်းပြချက်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဒါဟာအခြေခံ, ကြမ်းပြင်, အခြေစိုက်စခန်းနှင့်မျှတမှုဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်အောက်ခြေကိုကြည့်လိုက်လျှင်တွင်းနက်ကြီးဖြစ်လာသည်။ အဲဒီမှာဆွဲငင်အားကိုသင်အဲဒီမှာရှာလို့မရဘူး။ အောက်ခြေနှင့်တွင်းနက်သည်အာရုံကြောများကိုအလွန်အမင်းအေးဆေးတည်ငြိမ်စေသည်။ လူသားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်ကအရာဝတ္ထုရဲ့အောက်ဆုံးကိုရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ကြောက်စရာယုန်များသာလျှင်အသုံးဝင်သောအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်လိုကြသည်၊ အကြောင်းမှာကမ္ဘာကြီးသည်အသုံးဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်သည်။
မရဏာနိုင်ငံသည်ကမ္ဘာအောက်၌ရှိ၏။ ကမ္ဘာကြီးနှင့်မနီးမဝေးတော့သင်မသိရသောကြောင့်မသက်မသာဖြစ်ရသည်။ သေလွန်သူများသည်မြေအောက်အောက်တွင်မွေးဖွားခြင်း၏ရင်းမြစ်လည်းရှိသည်။ အပင်အားလုံးဘယ်လိုနောက်ထပ်ကြီးထွားသင့်သလဲ
မိုThe်းတိမ်သည်ကောင်းကင်၌ရှိသောသိုးဖြစ်၏။ တိမ်တွေအမြဲဝမ်းနည်းနေတယ်။ သူတို့ကမကြာခဏငိုရန်ရှိသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ကျွဲနွားများကိုရန်လိုသောနေမှကာကွယ်ပေးသည်။ မိုးတိမ်သည်လူတို့၏ကောင်းမှုနှင့်မကောင်းမှုကိုစုပ်ယူသည်။ သင်သည်သူတို့၏ပုံသဏ္fromာန်မှနာရီသည်မည်သည့်အရာရောက်သည်ကိုပြောပြနိုင်သည်။ လှုပ်ရှားမှုနှင့်ရေသည်တိမ်တိုက်တွင်အတူတကွကခုန်နေသည်။
သုပ်ထဲမှာအညစ်အကြေးမထည့်သင့်ဘူး။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်နာမကျန်းခြိမ်းခြောက်! ဖုန်သည်အပြစ်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ညီမျှသည်။ အနာကိုအညစ်အကြေးအဖြစ်မှတ်ယူနိုင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အနာသည်အစွန်းပေါ်တွင်အညစ်အကြေးနှင့်တူသောအစွန်းပေါ်တွင်မကြာခဏဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ အလှည့်အတွက်ညစ်ညမ်းမှုသို့မဟုတ်အစွန်းအထင်းအပြစ်ရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်စွန်းနေတယ် ကျွန်တော်တို့ဟာမစုံလွန်းလို့စိတ်ထိခိုက်ခဲ့သလား။ သို့မဟုတျကြှနျုပျတို့ကိုနာကွသောကွောငျ့မစုံလငျသလော။ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်စုံတစ်ရာ၊ ဥပဒေသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အားချိုးဖောက်ခြင်းအတွက်အပြစ်ရှိပါသလား။ ဒါပေမယ့်ငါတို့မနာပါဘူး! ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးပြည့်စုံပြီးအပြစ်ကင်းကြသည်။ ဤကဲ့သို့သောအရာကိုပြောသောသူသည်၊
ထောင်၏နံရံသည်နှလုံးသားတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပြင်ဘက်နံရံများသည်အနက်ရောင်နှင့်အတွင်းပိုင်းတွင်အနီရောင်ရှိသည်။ အကျဉ်းထောင်ရပ်ပြူတင်သည်အငယ်ဆုံးမဟုတ်သော်လည်းအသက်အကြီးဆုံးလည်းမဟုတ်ပါ၊ ဂျာမန်နီးယားကိုလည်းထောင်ချနိုင်သည် Rasputin နှင့် Germania အတူတူအိပ်ကြသည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်ဆစ်ဖလစ်ရောဂါကူးစက်မည်ကိုစိုးရိမ်နေသည်။ Germania သည်ရာစပိန်မှထွက်ခွာသည်။ သူမသည် Pippi ကိုအချိန်တိုလေးသာလုပ်ရန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားထဲ၌ရှိနေသောကြောင့်သူမဝေးမည်မဟုတ်။ ထောင်တစ်ခုကမင်းမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အဆောက်အ ဦး တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ရပ်ပြူတင်သည်မှန်ရှေ့တွင်ရပ်။ သူ၏ဝက်ခြံများကိုဖော်ပြသည်။ ငွေအပြစ်ကင်းစင်မှုအပေါ်အပြစ်များကဲ့သို့ဖြိုခွဲလိုက်သည်။
ကြွက်များသည် megalomaniac ဖြစ်လာသည့်ကြွက်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်သက်ရှိအားလုံးမှရေဒီယိုသတ္တိကြွမှုကိုအကောင်းဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အကယ်စင်စစ်သူတို့သည်တနေ့ခြင်းတွင်၊ ကြွက်များသည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး သတ်ပစ်ကြပြီးလူသားများသည်အလွန်ဆင်တူသည်။ အဘယ်သူသည်တတ်နိုင်ကြွက်! သို့သော်ကြွက်များသည်လူသားများထက် ပို၍ စမတ်ကျသည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့၏ရွယ်တူချင်းများကသတ်ဖြတ်နေသည်ကိုသတိပြုမိပါကအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောအစာကိုမစားရန်လျင်မြန်စွာသင်ယူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ကြွက်အဆိပ်ဟာဒီငရဲသတ္တဝါများကိုသုတ်သင်ပယ်ရှင်းဖို့အမြဲတမ်းဖြေရှင်းချက်မဟုတ်ပါ။ အလယ်ခေတ်၌ကြွက်များကိုလူများကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာလူသားတွေအတွက်အောင်ပွဲပါ။ သားကောင်မှပြစ်မှုကျူးလွန်သူမှ! ချစ်စရာကြွက်များကိုအိန္ဒိယ Karni Mata ဘုရားကျောင်းတွင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်သည်။ သို့သော်အနောက်နိုင်ငံများတွင်ဆိုးရွားလှသည့်ကြွက်များသာရှိသည်။တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကြွက်များသည်နိမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်ပင်တည်ရှိသည်။ သို့သော်ပိုးမွှားကင်းသော Psychosaurus က“ ငါတို့ဟာအလယ်ခေတ်မှာမနေတော့ဘူး။ အန္တရာယ်ရှိသောရောဂါကူးစက်မှုသယ်ဆောင်နှင့်အတူဝေး! ဘာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေဘာမှမလုပ်ကြဘူး။ သူတို့ကဘယ်တော့မှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။
သင်က Kink ကိုမထိနိုင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကကခုန်ခြင်းနဲ့ဝေးလွန်းတယ်။ ဘာမျှမချိုးလျှင်, အရာရှိပါသည်။ မျဉ်းတစ်ကြောင်းကဒီကနေအဲဒီကိုသွားတယ်။ ဒါဟာပုံမှန်ပါပဲ၊ ဒါကြောင့်သင့်ကိုစိတ်ဓာတ်ကျစေတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ဗိသုကာပညာရှင်များ။ လိုင်းကဘဝကိုမစားဘူး မျဉ်းကြောင်းသည်သက်ရှိများကိုပျက်စီးစေပြီးအခန်းအားအလယ်အလတ် ၂၀ ဒီဂရီအထိအပူပေးနိုင်ရန်၎င်းမှစွမ်းအင်ရရှိသည်။
slope သည် slope ၏ကျော်ကြားမှုအရ slope, slope slope နှင့်ကိုက်ညီသည့် ang သို့လှည့်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအတိမ်းစောင်းသည်မတရားမဟုတ်ပါ၊
အပင်သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအသီးကိုသီးသောအပင်တစ်ပင်ဖြစ်သည်။ သစ်သားသည်အသွေးနှင့်လုပ်ရမည်။ အရွက်သည်ရယ်နိုင်သည်။ ရောင်စုံကောင်းတယ်မီးခိုးရောင်မကောင်းဘူး။ မာရ်နတ်သည်ကောင်းသောအစာကိုစားတတ်၏။ ကောင်းသောအရာသည်သူ့ဟာသူရှိနိုင်သည်။ မကောင်းမှုမူကားပျက်စီးခြင်းအပေါ်မူတည်သည်။ ထို့ကြောင့်မကောင်းမှုသည်ဘယ်သောအခါမျှအောင်မြင်နိုင်မည်မဟုတ်ချေ။
ဆားတွင်ဆိုဒီယမ်နှင့်ကလိုရင်းတို့ပါဝင်သည်။ ရပ်တည်မှုသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းတွင်ရှိသည်။ သို့သော်တည်ရှိခြင်းသည်ပစ္စည်းတစ်ခုအနေနှင့်လိုအပ်သည်။ ဖြစ်တည်မှုသည်၎င်းတွင်ပါဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုလိုအပ်သည်။ အဆိုပါအကျဆုံးတည်ရှိ။ “ စတော့ရှယ်ယာ” ဟူသောဝေါဟာရသည်ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်အလွန်နီးစပ်သည်။
ကြွက်များတွင်ခြေလေးချောင်းရှိပြီးဘုရားသခင့်လမ်းတော်အတိုင်းပြေးသည်။ သို့သော်အချို့ကြွက်များသည်၎င်းတို့၏ ဦး တည်ရာကိုမသိကျိုးကျွံပြုခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည်တစ်နေ့လုံးပျင်းရိစွာ (ခေါင်းကိုအောက်) နှင့်ညအချိန်တွင် (သွေးနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယများသောက်သုံးခြင်း) တွင်ပျော်ပါးကြသည်။ ကြွက်သည်လင်းနို့ကဲ့သို့မျက်စိကန်းသည်။ ၎င်းသည်သူတို့၏အပြစ်များအတွက်ဘုရားသခင်ဒဏ်ခတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယာယီဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုအနေဖြင့်ပျံသန်းနေသောကြွက်များသည်ယခုအခါသူတို့၏နားများနှင့်တွေ့မြင်ရမည်။ ဒါဟာလုံးဝဗြောင်ကျကျဖြစ်ပါတယ်။
ပါးလွှာသောအမျိုးသမီးများသည် anorexia သင်္ဘောကျင်းတွင်လျင်မြန်စွာထိုင်နေကြသည်။ wobbly နှင့်အဆီအပေါင်းအဘော်တို့စွပ်စွဲ။ ပါးလွှာသောကိုယ်အလေးချိန်ရလိုလျှင်၎င်းသည်ကိုယ်နှိုက်ကို“ ပါးလွှာ” ဟုခေါ်ရမည်။ ပါးလွှာသောအရာသည်တခါတရံအထူထက် ပို၍ ပြင်းထန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်၎င်း၏ချိုမြိန်သောအစာတွင်အနှစ်သာရများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ပါးလွှာသောအထူထက်ပိုဥာဏ်ရည်ရှိတတ်သည်။ ၎င်းသည်ပါးလွှာသောပျဉ်ပြားတပ်ဆင်ခြင်းများနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့တွင်ခေါင်းပေါ်တွင်ထူထပ်သောဘုတ်အဖွဲ့ရှိသည်။
ကျွန်တော့်နာမည်ကရှမစ်ဖြစ်ပြီးသေပြီ စာတန် & Sons ကုမ္ပဏီရှိကျွန်ုပ်၏အလုပ်ခွင်တွင်ကျွန်ုပ်၏လောဘကြီးသောသူဌေးသည်ယူရို ၁၀၀ တန်မှတ်စုသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ သေပြီးတဲ့နောက်ကျေနပ်ရောင့်ရဲတဲ့ဘဝရရှိဖို့ကျွန်ုပ်အခွင့်အလမ်းကိုသတိပြုမိလိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ငွေစက္ကူကိုပိုက်ဆံအိတ်ထဲထည့်လိုက်ပြီး ၄ င်း၏အပြင်ဘက်သားရေပေါ်တွင်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုဆေးထိုးခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်သူဌေးကဖမ်းမိတယ် ငါသေပြီးနောက်ငရဲသို့မသွားမည်ကိုသူအာမခံပြီးနောက်မှသာကျွန်ုပ်သည်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုပြန်လည်ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲငါ AOK ၏ရှေ့မှောက်၌ငှက်ပျောခွံပေါ်တွင်မတော်တဆတိုက် မိ၍ ခေါင်း၏နောက်ကျောနှင့်မာကျောသည့်ကျောက်ခင်းပေါ်တွင်လဲခဲ့သည်။ ငါချက်ချင်းပင်သေသွားပြီ။ ကတိတော်အတိုင်း, ငါငရဲသို့မသွားခဲ့ကြပေမယ့်ငါမကောင်းမှုကိုအနိုင်ယူပြီးကတည်းကသူတို့သညျငါ့ကိုကောကောင်းကင်သို့မသွားချင်ကြဘူးဒါပေမယ့်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ဘူး။ အခုတော့ငါကကောင်းကင်နဲ့ငရဲကြားမှာအစဉ်မပြတ်သွားနေတယ်၊ ​​ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။
ဖရက်ဒ် - ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလုံးဝပိုများတယ်။ ဘယ်လူထုံကမ္ဘာကိုဖန်တီးခဲ့တာလဲ
ဒက်လပ်ဖ် - ဆင်းရဲဒုက္ခသည်လူထုံလုပ်ရပ်များမှကာကွယ်သည်။ ဘီယာအလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကသင့်အားကာကွယ်ပေးသည်။ မကောင်းမှုသည်ကောင်းသောအကျိုးကို ဦး တည်စေသည်။
Fred: ဒါကနောက်နည်းလမ်းမဟုတ်လား။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုး?
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး - ဘုရားသခင်ဟာအမှားအယွင်းမရှိ (ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့)၊ သူဘာကြောင့်ကမ္ဘာကြီးကိုဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းတာလဲဆိုတာသူသိလိမ့်မယ်။
Mephisto - ငါကမကောင်းမှုကိုအမြဲလိုချင်တယ်၊
Bert Hellinger: မြင့်မားတဲ့အဆင့်မှာမကောင်းမှုကကောင်းတယ်။
Fred: ငါမြေကြီးပေါ်မှာနေထိုင်; မြေကြီးသည်အနိမ့်ဆုံး ဖြစ်၍၊ အဆင့်မြင့်သည်ကျွန်ုပ်ကိုအသုံးမပြုပါ။ ဤအရာအားလုံးသည်အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချစရာမရှိပါ။
Detlef: နေနတ်ဘုရားလည်းခံစားခဲ့ရသည်။ သူသည်လူသားတစ် ဦး အနေဖြင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံခဲ့ပြီးသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်။
Fred: ဒါကသူနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုပဲ။ ငါအများကြီးပိုကောင်းခံစားရတယ်။
ဘုရားသခင်သည်ထက်ကြီးမြတ်သည်။ ဘေးကင်းရေးအတွက်ဘုရားသခင်အကြောင်းမကောင်းသောအရာများကိုမရေးချင်ပါ၊ အကယ်၍ ဘုရားသည်မာရ်နတ်မဟုတ်ပါက၊ နတ်ဘုရားများသည်ဘုရားမှန်လော။ သို့မဟုတ်သူတို့၏တည်ရှိမှုသည်ကောင်းသောအစာစားခြင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပါသလား။ ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာရှိပါက၊ ကြားနေနှစ်ခုလုံးပါ ၀ င်သော A သံများသည်အဆုံးမဲ့ L သံကိုခြုံငုံထားသည်။ အကယ်၍ များစွာသောနတ်ဘုရားများရှိပါက၎င်းသည် ပို၍ အရောင်အသွေးစုံ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်လာပြီးလူသားများအတွက်ပိုမိုနားလည်လာသည်။ အခြားဘုရားများအကြားရှိနတ်ဘုရားတစ်ပါးစီတွင်ကိုယ်ပိုင်တာဝန်ရှိသည်။ နတ်ဘုရား ၉၉ လုံးရှိသောကြောင့်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်နာမည် ၉၉ ခုမလိုအပ်တော့ပါ။ ပြီးတော့ရာဂဏန်းဘုရားဟာဘုရားအားလုံးကိုပြန်လည်စည်းလုံးစေလိမ့်မယ်။အကောင်းနှင့်အဆိုးကိုတစ်ယူသန်ဝါဒဖြန့်ဖြူးသောဘုရားများသည်များစွာသောနတ်ဘုရားများတွင်ပျော်ဝင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံနတ်ဘုရားများကိုကောင်းကင်တမန်များ၊
ကြက်သွန်ဖြူဟာအလတ်ဆတ်လတ်ဆတ်သည်။ သူ့ခြေချောင်းတွေကွဲနေတယ်။ တစ် ဦး ကအစစ်အမှန်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအုပ်စုခွဲ၎င်း၏အမြစ်ရှိပါတယ်။ အပြင်ဘက်တွင်ကြက်သွန်နီသည်တူညီမှုကိုပြသသည်။ ကြက်သွန်ဖြူသည်သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်နှင့်စုန်းမများကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ ဥသည်သွေးကိုသန်စွမ်းစေပြီးကပ်ပါးကောင်များအတွက်အလွန်စား သုံး၍ မရသည့်အတွက်သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်များပင်အစာစားချင်စိတ်ပျောက်သွားသည်။ အဆိုပါ schizophrenic leek လည်း tapeworms သို့မဟုတ် putrefactive ဘက်တီးရီးယားအဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကပ်ပါးကောင်သေဆုံးသည်။ ကြက်သွန်ဖြူကလူသားတွေကိုစီးကရက်မီးခိုးလိုခွဲလိုက်တယ်။ တချို့ကြိုက်တယ် - ဒါကလူကောင်းတွေပါ။ သို့သော်မကောင်းသောယောက်ျားများ (ဥပမာသွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်၊ စုန်းမများ၊ နာဇီများ၊ ကလေးသူငယ်များ၊ အရင်းရှင်များနှင့်အစိမ်းရောင်မဲဆန္ဒရှင်များ) ကိုသူ၏အနံ့ကြောင့်ရွံမုန်းကြသည်။
စာတန်နှင့်စာနို၏ ၀ န်ဆောင်မှုရုံးတွင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းဖြင့်သင်သည်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနှင့်လှပခြင်းများကိုလျင်မြန်စွာဖြစ်လာနိုင်သည်။ စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူ (Teufel) သည်လောကဆန္ဒအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်ကန်ထရိုက်တာသည်သူမသေဆုံးပြီးနောက်စိတ်ဝိညာဉ်အားသုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်ငရဲ၏ခန္ဓာဗေဒပညာရှင်များထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါကန်ထရိုက်ကန်ထရိုက်တာထံမှသွေးတစ်စက်မှတဆင့်တရားဝင်တရားဝင်သည်။
အာနိုးကကမ္ဘာပေါ်မှာကပ်ရောဂါဆိုးတွေအားလုံးကိုသေစေတဲ့ကပ်ဘေးတစ်ခုအကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်နေတယ်။ လူကောင်းတွေမှာဖျားနာတာဒါမှမဟုတ်ရောဂါကူးစက်ခံရတာကိုအလွယ်တကူမခံရဘူး။ အာနိုးဟာလူကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ သူမည်သို့ဤမျှသေချာနိုင်သနည်း ကပ်ရောဂါကလူကောင်းတွေကိုတကယ်ပဲသတ်မယ်ဆိုရင်ကော။ ၎င်းသည်ဤလောက၏မတရားမှု၏သာမန်ဖြစ်သော်လည်းပုံမှန်ဖြစ်သည်။ အာနိုးကဒီဟာကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိပေမဲ့လည်းကံကြမ္မာကိုကာကွယ်ဆေးထိုးချင်တယ်။
သတိသည်အရာများသို့ဖြစ်ခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်နာကျင်ခြင်းထက် ပို၍ ကြော့ရှင်းသည်။ ထို့ကြောင့်ခြင်သည်ဂုဏ်အသရေမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အားကြီးသော ၀ ိညာဉ်များသည်သတ္တိရှိရန်သတ္တိရှိသည်။ မင်းလက်ချောင်းမဖြတ်သင့်ဘူး။ ဒီတော့ရှေးရှေး: သတိထားပါ၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း၏အရောင်ကိုပြတ်သားမှုဟုခေါ်သည်။ ငရုတ်ကောင်းနှင့်လိင်ဗုံးများသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အနည်းငယ်စပ်နိုင်သည်။
လက်နက်တွေဆန့်။ လက်များလက်၌ပွင်စတင်။ လက်များကိုလက်ဖြင့်ကိုင်တွယ်ပါ။ အကိုင်းအခက်များသည်သစ်ပင်လက်များဖြစ်သည်။
နယ်နိမိတ်ကကန့်သတ်ချက်တစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကွာခြားတယ်။ ၎င်းသည်နယ်စပ်မှစတင်သည်သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်သည်။ နယ်စပ်သည်ဘ ၀ အတွက်ရေယာဉ်တစ်စင်းဖြစ်သည်။ သွေးသည်အသက်သွေးကြောလိုအပ်သည်။ အိမ်တစ်လုံးသည်၎င်း၏နံရံများဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကိုကန့်သတ်ထားသည်။ နေထိုင်မှုသည်သူ၏အိမ်မှရွေ့လျားသွားသောအခါအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နေသောပင်လယ်ထဲသို့သူနစ်မြုပ်သွားသည်။
အဆိုပါပန်းကန်တစ်လှည့်လည်အစွန်းရှိပါတယ်။ frame နဲ့မတူတာကအစွန်းကပိုင်ရှင်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုပြီးစေတယ်။ ဘောင်သည်လက် ၀ တ်ရတနာဖြစ်သည်။
“ ကမ္ဘာ” ဟူသောဝေါဟာရသည်အရာရာ၏ရှုခင်းကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုသတ်ဖြတ်မှုကြီးမြတ်အဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာအဆုံးမရှိဘူး။ လူတို့၏အကြည့်သည်အဆုံးမဲ့လမ်းများတွင်ရပ်တန့်မသွားနိုင်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရသောကမ္ဘာကြီးကို၎င်း၏အနားများ၌ပိတ်ထားသည်။ ထိုတွင်လုံခြုံသောကမ္ဘာသည်အကန့်အသတ်မဲ့လက်နက်များဖြင့်အကန့်အသတ်မဲ့ရှိနေသည်။
Gustav ပြောင်းဖူးနှစ်ခုလုံးအပေါ်မျက်စိကန်းသည်။ ခြေတော်သည်အဘယ်အရာကိုမျှမမြင်ရ။ ဒါကကောင်းပါတယ်။ ဘာမှမမြင်ရရင်စိတ်ဓာတ်ကျမှာမဟုတ်ဘူး။ ထို့ကြောင့်ဂတ်စတာသည်ပျော်ရွှင်သည်။ မျက်စိကန်းသောချိန်းတွေ့သူများရှိသည်။ သငျသညျတွေ့ဆုံရန်လည်းမျက်စိကန်းဖြစ်ကြသည်။ လင်းနို့များသည်အနက်ရောင်များကိုလည်းတွေ့ကြသော်လည်းတောက်ပစွာကြားနိုင်သည်။ အမှောင်သည်အလင်းကိုမြင်သလား။
လသည်မှောင်မိုက်၌ရယ်တတ်၏။ ဒါဟာအပြည့်အဝမြင်နိုင်ပါသည် လပြည့်ညအဖြစ်သူသည်ယောက်ျားဖြစ်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူမကအမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ် ဒါမှမဟုတ်ပတ်ပတ်လည်အခြားလမ်းခဲ့သလဲ လသည်ကောင်းကင်ကိုကြောက်လန့်တကြားဖြင့်ပြေးနေသည်။ သူကမတွေ့ရတာကိုမကြိုက်ဘူး၊ လင်းနို့များ၊ လင်းနို့များနှင့်ကျီးများကိုသာလုပ်ခွင့်ပြုသည်။ လျောက်ပတ်သောလူတို့သည်အိပ်သောအခါလသည်အထွန်းလင်းဆုံးဖြစ်သည်။
တ ဦး တည်းအခိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အစဉ်အမြဲအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင်သာခဏဖြစ်သည်။ "အချိန်လေး" ၏အများစုသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ။ ဒါကြောင့်အချိန်မရှိဘူး။ ထိုအသေးနာရီ ticking ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်နာရီများသည်မုသာကောင်များဖြစ်သည်။
လူတွေကမမှတ်မိတော့ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိအခိုက်အတန့်မှအတိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ နေ့တိုင်းသင်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားအတိတ်သတိရပါ။ တကယ့်ဖြစ်ပုံကပြန်လည်ကုစားလို့မရတော့ဘူး။
အစအ ဦး ၌နို့ရှိ၏။ စကြဝuniverseာကိုနို့ရည်ဖြင့်ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နဂါးငွေ့တန်းအကြောင်းပြောကြသည်။ နို့သည် Urkuh ၏ကြီးမားသော MUU မှထွက်လာသည်။
လတ်ဆတ်သောဘဝ၏အစိုဓာတ်ကိုအလင်းအဖြစ်သီဆို။ လတ်ဆတ်သောအသားပုပ်သောအသားထက်ပိုမိုကျန်းမာသည်။ သစ်သီးဖျော်ရည်သည်သွေးထက်ပိုမိုလတ်ဆတ်သည်၊ အကြောင်းမှာတိရိစ္ဆာန်သည်လောဘကြောင့်ပုပ်နေသောကြောင့်။
လိပ်များသည်ရှေးခေတ်သန္ဓေသားများဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အချိန်လုံးဝမရှိသည့်အချိန်မှဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ကိစ္စကလည်းကွဲပြားတယ်။ ၎င်းသည်အသေးငယ်ဆုံးအမှုန်များမပါ ၀ င်သော်လည်းမာကျောမှုကဤအရပ်မှထိုအရပ်သို့မျောမျောသွားသည်။ အစစ်အမှန်ကမ္ဘာမြေဘယ်တော့မှမသေ။
ပြိုပျက်နေသောရဲတိုက်အပျက်အယွင်းများကြောင့်လေသည်တိတ်တဆိတ်လွင့်မျောသွားသည်။ အမှောင်နံရံများသည်အဖြစ်အပျက်များမှလွတ်ကင်းနေသည်။ မနေ့ကမီးသတ်မုန်တိုင်းများ၊ အမာရွတ်များသည်ယနေ့ဖြစ်သည်။ ကြွက်တစ်ကောင်သည်စာရွက်ပေါ်သို့သေလွန်သောသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းပြောပြနိုင်သည်။ ငှက်များသည်အနီရောင်ညနေခင်းတွင်ပျံသန်း။ မည်သည့်နေရာတွင်မျှပျောက်ကွယ်သွားသည်မဟုတ်ပါ။
အဆိုပါ primal အမြဲပထမ ဦး ဆုံးလာပါတယ်။ အကြောင်းရင်း၊ ဇာစ်မြစ်၊ မူလဟင်းချို၊ ယူရေးနပ်စ်၊ မူလတန်းနွားများ၊ ဘိုးဘေး၊ မူလသစ်တော၊ Big Bang နှင့်မှတ်တမ်းများနှင့်ထူးဆန်းသောအဘိုးအဘွားများ၏မှတ်တမ်းများဖြစ်သည်။ အဆုံးစွန်သောသေးဟူသောဝေါဟာရကိုမသိခဲ့ပါ။ ဗီယင်နာတွင်အန္တရာယ်ရှိသောဆိုသည်မှာအထူးသဖြင့်အန္တရာယ်ရှိသောအရာတစ်ခုကိုဆိုလိုသည်။
ကမ္ဘာကြီးပြားသည်။ အကယ်၍ ကမ္ဘာကြီးသည်နယ်ပယ်တစ်ခုမျှသာဖြစ်ခဲ့လျှင်နယူးဇီလန်ရှိလူများသည်ကမ္ဘာမြေမှကျဆင်းလိမ့်မည်။ NASA မှ၎င်း၏အတုဓါတ်ပုံများကိုမြည်းပေါ်သို့ကပ်ထားသင့်ပါသလား။ သူတို့ဟာလွန်းတဲ့လေကိုလွင့်မျောသွားစေတယ်။
အစသည်ရုတ်တရက် Sprint ကဲ့သို့စတင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဆောင်း ဦး ရာသီ၌မြူကဲ့သို့ခုန်ချနိုင်သည်။ အပင်များပေါက်ပွားလာပြီးကလေးငယ်များကိုဆေးရုံတွင်ပိုးမွှားများမွေးဖွားသည်။ အစပြုခြင်းသည်အဆုံးသတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကလေးမွေးဖွားခြင်းသည်ကိုယ်ဝန်ကိုအဆုံးသတ်စေသည်။ အစသည်မိမိကိုယ်ကိုမသိသေးပါ။ အဆုံး၌သာသူသည်မည်သူဖြစ်ကြောင်းကိုအစသိသည်။
ကလေးများသည်ကလေးများချောကလက်ကိုစားကြသည်။ လူကြီးများသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူချောကလက်စားကြသည်။ ထုတ်ကုန်နှစ်ခုလုံးသည်ချောကလက်နှင့်တူသည်။ မင်းတွေ့နိုင်တာကကလေးတွေကဘာမှထူးတာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကမင်းနဲ့ငါလိုချောကလက်စားသူတွေပါ။ နေ့ကလေးထိန်းဌာနသို့သွားသော်လည်းကလေးများရေလောင်းရန်မလိုအပ်ပါ။
toadstool သည်၎င်း၏လွတ်လပ်မှုကိုနှစ်သက်သည်။ အပေါ်ကနေမိုးရွာဖို့လိုတယ် သို့သော်မှိုနီသည်ဘုရားသခင့်အလိုတော်ကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်သည်။ အဆိုပါယင်ကောင် agaric အရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာထားရန်လိုသည်။ ဒါဟာနှင်တံ၏ပိုင်ရှင်ပင်။ ကြီးစိုးကအရေးကြီးတယ်။ မိုးရွာရွာယင်ကောင်အပေါ်ကျရောက်ပါတယ်။ မှိုသည်ကြီးစိုးခြင်းထက်အခြားအရာများရှိသော်လည်းသတိပြုမိသော်လည်း agaric သည်မိမိကိုယ်ကိုဖွင့်ရန်မဝံ့ပါ။ ပြီးတော့သူကလုပ်တယ်၊ ကြောက်စိတ်ကအပေါ်ကနေမှိုသို့ဆင်းလာသည်။ ဟေ့ဒီ သူသည်ယခုအချိန်တွင် toadstool မဟုတ်တော့ပါ၊ သူ၏လိုဏ်ဂူတွင်လူလတ်တန်းစားဘ ၀ ကိုနေထိုင်လိုသောကြွက်ငယ်လေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်မလုပ်ပါဘူး ကြွက်သည်ဒphilosophနိကဗေဒကိုလေ့လာပြီးကမ္ဘာကြီးကိုအသစ်ပြန်စလာပြီးကျော်ကြားလာသည်။
မာတင်လူသာနှင့်ပေါလ်တို့ကလျှပ်စီးလက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ လျှပ်စီးများကဲ့သို့လျင်မြန်စွာသူတို့သည်ဉာဏ်အလင်းရှိသူများဖြစ်လာခဲ့သည်။ လျှပ်စီးလက်ခြင်းကငါတို့ကိုတိုးတက်စေသလား။ သို့မဟုတ် flash သည်အရေခြုံမှုကိုဖန်တီးသည့်တိုတောင်းသော circuit တစ်ခုမျှသာလော။ နောက်မိုthat်းသက်မုန်တိုင်းအတွင်းသင်ကြိုးစားရမည်။
စွပ်စွဲချက်ဖြင့်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီအရဘီလီဖဲလ်မြို့သည်ပင်မရှိခဲ့ပါ။ အချိန်ကာလတစ်ခုအနေဖြင့် Bielefeld ၏တည်ရှိမှုကိုအရိပ်သည်ဖုံးကွယ်ရန်မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကပူးပေါင်းကြံစည်မှုကိုသီအိုရီတစ်ခုမျှသာသို့မဟုတ်ပြက်လုံးတစ်ခုအဖြစ်တင်ပြရန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ကြသည်၊ ထို့ကြောင့်မည်သူမျှ Bielefeld ၏အတုသည်ရှင်းလင်းသောအမှန်တရားဖြစ်သည်ဟုမည်သူမျှမထင်မြင်နိုင်အောင်ဖြစ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဘီလ်ရှိပါတယ်။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင်ဘီလ်ကလင်တန်သည်အမေရိကန်သမ္မတဂျွန်အက်ဖ်။ ကနေဒီအိမ်ဖြူတော်သို့လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ၀ န်ကြီးကလင်တန်က "ငါသမ္မတဖြစ်မယ်!" ဟုဟစ်ကြွေးခဲ့သည်။ ထိုမှော်အတတ်အားဖြင့်ကလင်တန်သည်ထိုအချိန်ကသမ္မတကနေဒီမှသူ၏ကံကြမ္မာနှင့်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းခိုးယူခဲ့သည်။ ရလဒ် - ကနေဒီသေသွားတယ်။ သို့မဟုတ်မဟုတ်ဘဲမိမိအ lookalike ။အစစ်အမှန်ကနေဒီအေးခဲခဲ့သည်။ Bielefeld ၏အတုဖြစ်တည်မှုသည်ပေါ်ထွန်းလာလိမ့်မည်ဟုခြိမ်းခြောက်သောအခါကနေဒီသည်တစ်ဖန်ပြန်လည်အရည်ပျော်သွားသည်။ ပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်မှုနှင့်ဂျာမန်ဘာသာကိုအထူးသင်ကြားပြီးနောက်ကနေဒီသည်ယနေ့ခေတ်တွင် Bielefeld ၏အရိပ်ဖြစ်သောမြို့တော်ဝန် Pit Clausen ၏မှားယွင်းသောအမည်အောက်တွင်ရှိသည်။
Sindbart: ဟေး၊ မင်းကိုတွေ့နိုင်တာပဲ!
Windbart: ရူးသွပ်ခြင်း ငါလည်းမင်းကို ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးမတည်မရှိဘူးဆိုတာမင်းစဉ်းစားတဲ့အခါအံ့သြစရာပါပဲ။
Sindbart: လူနှစ် ဦး တွေ့ဆုံခြင်းမရှိသည့်တိုင်၎င်းသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်တူညီသောအဆင့်တွင်တွေ့ကြုံခြင်းမရှိသောအဆင့်ဖြစ်သည်။
Windbart: မင်းနဲ့တူတဲ့သူနဲ့တွေ့ဖို့ခဲယဉ်းတယ်။ သငျသညျခဲဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လှည့်စားခြင်းနှင့်အမှန်တရားအကြောင်းအသေးစိတ်ဆွေးနွေးရန်အခွင့်အရေးယူသင့်သည်။
လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့်ပင်လယ်သည်ကြီးမြတ်မှုကိုခွင့်ပြုနိုင်သည်။ ပင်လယ်သည်နတ်ဘုရားများ၏တုတ်ကျင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် (မျက်ရည်များသည်ဆားပါ ၀ င်သည်) ။ ပင်လယ်သည်ကမ္ဘာမြေအတွက်အစားအစာဖြစ်သည်။ သဲကန္တာရ၏ရေငတ်ခြင်းသည်ကြာမြင့်စွာကတည်းကခြောက်သွေ့ခဲ့ပြီးသဲကန္တာရသည်နေထိုင်ရန်မလိုတော့ပါ။
Arnold Heitermann ဟာရုပ်မြင်သံကြားကိုမကြည့်ဘူး၊ သတင်းစာမဖတ်တတ်ဘူး။ ရုံခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်။ Otto Normal အတွက်လက်ရှိအရာသည်အရေးကြီးသည်၊ အခြားအရာအားလုံးသည်အရေးမကြီးပါ။ အာနိုးဟာ mayflies ကိုမဟုတ်ဘဲပိုကြီးတဲ့ရုပ်ပုံကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ ထို့အပြင်သတင်းအချက်အလက်မှန်ကန်မှုရှိ၊ အကယ်၍ ခေါင်းစဉ်က 'နက်ဖြန်ကမ္ဘာကြီးကုန်ဆုံးတော့မည်' ဟုဆိုပါက Mr. Heitermann သည်သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုလုံးကိုသေချာပေါက်ဖတ်လိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောကမ္ဘာပျက်မည့်နေ့သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြောင်းပြချက်များကြောင့်သင့်ကိုတကယ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
ရေလှုပ်ရှားရတာကိုနှစ်သက်တယ်။ သဘာဝကခွင့်ပြုလျှင်၎င်းသည်စီးဆင်းသွားသည်။ ရေဟာလတ်ဆတ်တယ်။ အလင်းသည်၎င်း၏လှိုင်းများ၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူတောက်ပ။ အသက်ရေရှိသောနေရာတိုင်းတွင်ရေရှိသည်။ ရေသည်အောက်ခြေ၌မကျန်ရှိသရွေ့တည်ငြိမ်မှုမရှိပါ။ ရေကစိုစွတ်နေတယ်၊
သငျသညျဖားမဟုတ်ကြောက်ရွံ့သောဖားမဖြစ်သင့်ပါ။ ဖားကဲ့သို့ရေနှင့်နီးကပ်စွာတည်ဆောက်ထားသူမည်သူမဆိုဝိညာဉ်၌နေထိုင်သည်။ Soul နှင့် Lake သည်တူညီသောရေ၊ ငါးနှင့်ဖားတို့သည်ထိုအတူတူသိကြသည်။ သငျသညျရေထဲမှာတကယ်ကြောက်လို့မရဘူး, ခြောက်သွေ့သောတိရစ္ဆာန်များသာနိုင်ပါတယ်။ ကြောက်လန့်ဖားမဟုတ်ဘူး။ ဖားများသည်အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းမှဘယ်သောအခါမျှမထွက်နိုင်ပါ။ ဖားသည်ကုန်းသတ္တဝါများထံမရောက်ရှိသေးသောငါးဖြစ်သည်။ ငါးမရှိတော့ပေမယ့်မျောက်တွေအတွက်မလုံလောက်ဘူး။ ဖားတွေဟာနားရွက်နောက်မှာစိမ်းနေတုန်းပဲ။ ဖားတွေဟာဝက်ခြံတွေကိုမကြာခဏရလေ့ရှိတယ်။
ရောမမွို့ရှိမြူခိုးမွို့ရှိအိမ်တစ်လုံး၏အမိုးမှတောဝက်များသည်ခုန်ကွသည်။ ဝက်သတ္တဝါများသည်အောက်ပါကျောက်ခင်းရှေ့တွင်သူတို့၏ကျောကိုကျောလိုက်ကြသည်။ ဝက်သည်ဘာမှမချိုးဖောက်ခဲ့ပါ၊ ဤသို့သောတောဝက်သည်အလွန်ကြံ့ခိုင်သည်။ သင့်အသွေးသည်ညှိုးနွမ်းခြင်းမရှိပါ။ ပြင်းထန်သောလေဖြတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့၏မီးသီးဖျော်ရည်များသည်သူတို့၏သွေးပြန်ကြောလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်အစဉ်မပြတ် pulseates ဖြစ်သည်။
ခံစားချက်များသည်အရောင်မရှိပါ။ သူတို့ဟာသစ္စာမဲ့တဲ့နေရာတွေ၊ မင်းရဲ့ခံစားချက်တွေကိုရင်ဖွင့်မလား။ ခံစားချက်အရေအတွက်နှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အဘို့ကြီးသောဖြစ်ကြသည်, သူတို့ပိုမိုအားကောင်းလာသည်နှင့်အားနည်းလာတယ်, သူတို့သည် carousel အပေါ်မြင်းများကဲ့သို့ပြန်လာမှုတ်သွင်းလာ။
ကမ္ဘာ၏အကျယ်အနက်သည်နက်ရှိုင်းသည်။ အရာအားလုံးအိပ်ပျော်သွားပြီးလသည်ကောင်းကင်၌ရှိသည်။ ၎င်း၏ငွေအလင်းပျက်စီးခြင်းသို့စီးဆင်း။ လက်တစ်ဖက်သည်လကိုဖမ်းလို။ ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်လကိုနှိပ်စက်သည်။ တူညီသောအနက်ရောင်ဖြစ်သောငွေသွေးသည်တစ်ချိန်ကလကဲ့သို့သောနယ်ပယ်တစ်ခုမှဆင်းသက်လာသည်။ ကမ္ဘာကြီးတုန်လှုပ်
သေခြင်းသည်ဘဝကိုငြင်းပယ်။ ၎င်းကိုထပ်တူဖြစ်စေနိုင်သည်။ လင်းယုန်ငှက်သည်အဘယ်သို့နေရမည်နည်း။ သူကနောက်ကျောမှာဘာ shit သငျ့သနညျး သူသည်အခြားတိရိစ္ဆာန်များကိုသတ်ခြင်းဖြင့်သာအသက်ရှင်နိုင်သည်။ လူလိုပဲ သက်သတ်လွတ်လူကောင်းတွေပါ။ သို့သော်သူတို့သည်လည်းသဘာဝ၏ခေါ်သံကိုလိုက်နာရမည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, အပင်လည်းသတ္တဝါများဖြစ်ကြသည်။ သက်သတ်လွတ်များတွင်ဗီတာမင်ချို့တဲ့သည်။ သူတို့၏အပြစ်ကင်းစင်မှုက၎င်းတို့အားဇီ ၀ မီးပွားများဖြစ်သည်၊ သက်သတ်လွတ်များသည်ကိုယ်ကျင့်တရား၏သွေးကိုသောက်ကြသည်။ အကြီးမားဆုံးသောသားရဲသည်လူသားများဖြစ်သည်။
ရုပ်မြင်သံကြားသည် စတင်၍ ရှေ့တွင်အရိုးစုတစ်ခုရှိသည်။ သူ၏ ဦး ခေါင်းခွံအရိုးများသည်အစီအစဉ်ကိုသတိမပြုမိတော့ပါ။ ရုပ်မြင်သံကြားကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကပိတ်ထားသည်။ ယခုအရိုးအမျိုးသားသည်သူ၌တစ်ခုခုပျောက်နေပြီးဒေါသထွက်နေသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ဆုတ်ခွာမှသာသူသေပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတယ်
ဘဝရည်ရွယ်ချက်မှာစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်ကြီးကိုကျွေးမွေးရန်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၎င်းသည်ဒေါက်တာ၏အမြင်ဖြစ်သည်။ Lightbrain သူကအောက်ပါတို့ကိုယုံကြည်သည်။ ကြီးမားသောစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်သည်ဝေးကွာသောကောင်းကင်မှကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ်၏အစေ့များကိုအကောင်အထည်ဖော်သည့်မြေသို့ကြဲသည်။ ဘဝအတွေ့အကြုံများမှတဆင့်ဝိဇ္ဇာအပင်များသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောနားကိုပေါက်ရောက်သည်။ ကြီးစွာသောစိုက်ပျိုးရေးစီးပွားရေးပညာရှင်ငါတို့သေသောနောက်ဒီနားကိုရိတ်သိမ်း။ ဒေါက်တာ Brainlight သည်ဒေါက်တာ၏အမြွှာညီဖြစ်သည် Lightbrain မနက်တိုင်း Dr. Brainlight သည်သူ၏အစ်ကို၏ရေနံစိမ်းသီအိုရီကိုစဉ်းစားသောအခါစပါးလုံး muesli နောက်သို့တက်လိုက်သည်။
နေသည်လည်းကမ္ဘာ၏စိတ်နှလုံးဖြစ်သည်။ အာကာသအတွင်းရှိအာကာသအတွင်း၌အာကာသများစွာရှိသည်။ သူမမှာတောက်ပတဲ့အစာအိမ်ရှိတယ်။ နေကကမ္ဘာကိုမွေးဖွားပေးတယ်။ နေကကမ္ဘာကိုစားတယ်။ နှစ် ဦး စလုံးအညီအမျှ။ နေကအရာအားလုံးပါ။ လူကြီးများနှင့်အဖြူရောင်ဖြစ်ပြီးလူငယ်များနှင့်အဝါရောင်ဖြစ်သည်။ နေတွင်မျက်နှာပေါ်တွင်အရေးအကြောင်းမရှိပါ။
သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်နှင့်မျက်မှန်များရှိသောလူတစ် ဦး သည်ငွေရောင်မှကြည့်။ အရောင်ဖျော့သောမျက်နှာရှိသည်။ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်သည်သူမမှန်၌သာမန်လူတစ် ဦး နှင့်တူသည်ဟုထင်သည်။ ဖုတ်ကောင်သည်သူ၏လက်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်သောအခါမည်သူမျှမမြင်နိုင်သည်မှာမှန်ထဲတွင်မိမိကိုယ်ကိုသာအသိအမှတ်ပြုသည်။ Vampire တွေအတွက်တော့ဒါပုံမှန်မဟုတ်ဘူး။ သူသည်ခွေးရူးပြန်ရောဂါရှိသည်မှာသေချာသည်။
အပင်များသည်လမ်းလျှောက်။ မရသည့်အစိမ်းရောင်တိရိစ္ဆာန်များဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အရွက်များသည်ရေကျောက်များဖြစ်သည်။ နေရောင်ခြည်ကသူတို့ကိုစိမ်းတယ်။ ကျောက်တုံး၊ ရေနှင့်နေတို့သည်ရုတ်တရက်အသက်ကိုရစေသည်။ အပင်တစ်ပင်သည်ကြီးထွားမှု၏အဓိကအားဖြင့်ကြီးထွားမှုကိုနှစ်သက်သည်။ ကြီးထွားလာခြင်းကမျိုးဗီဇကိုမသိ၊ အချိန်တိုင်းသူတို့ကိုသိရှိစေသည်။ သငျသညျကသယ်ဆောင်ရင်တောင်အစီအစဉ်တစ်ခုမကြီးထွားလာသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူအပင်များသည်ဘဝနှင့်ကျပန်းကြီးထွားလာသည်။
ဦး ခေါင်းခွံအချို့သည်ခေါင်းမာပြီးခဲယဉ်းသည်။ Hardness သည်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးကြာရှည်ခံမှုကိုပေးသည်။ အရိုးစုတစ်စုခဲယဉ်းသည်။ များသောအားဖြင့်မာကျောခက်သည်။ သို့သော်လိင်တံသည်တစ်ခါတစ်ရံ၌သာခက်ခဲသည်။ - ဘာကြောင့်လဲ။ - မာကျောမှု၏အစွန်းသည်အခန်းအတွင်းရှိအထင်ကြီးစရာဖြစ်သည်။ အနားစွန်းများကိုလျစ်လျူမရှုသင့်ပါ၊ နံရံနှစ်ခုတိုက်မိသောအခါတိုက်မိခြင်းကိုအနားဟုခေါ်သည်။ ထို့ကြောင့်အစွန်းသည် carom ၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အားနည်းသောစိတ်နှလုံးအတွက်မဟုတ်ပါ။ ကျောက်ခဲလည်းခဲယဉ်းသည်။ ကျောက်တုံးသည်အခြားကျောက်တုံးများနှင့်တူသောကြောင့်၎င်းသည်မျက်နှာမရှိပါ။ သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုမှာအရာအားလုံးအတူတူပါပဲ။ ဗီရို၊ စားပွဲ (သို့) သွားတိုက်တံ၊ နေရာတိုင်းမှာနေသောကျောက်ခဲအဲဒါကိုအဖြစ်မှန်လို့ခေါ်တယ် အခြားသူများ၏ ဦး ခေါင်းခွံများတွင်ရိုက်ထည့်ရန်ကျောက်တုံးကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒါဟာကျောက်ခေတ်၌အရေးကြီးသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ကျောက်တုံးအချို့ကိုပြောနိုင်ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းကျောက်များကိုဆဲလ်ဖုန်းဟုခေါ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်မှန်ကန်စွာစဉ်းစားပါကလှပသောကျောက်မျက်ရတနာများလည်းရှိသည်။ နဂါးများကသူတို့ကိုစုဆောင်းသည်။
အဆိုပါကောက်ယူသိပ်သည်းတစ်ခါတစ်ရံကျဉ်းမြောင်းသည်။ စုဆောင်းကောက်ယူမှုသည်အမြဲတမ်းတည်ရှိမှုအဖြစ်လုံခြုံမှုကိုပေးသည်။ ဒါမှမဟုတ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်သည်။ စုဆောင်းကောက်ယူတာထက်စုဆောင်းကောက်ယူတာကပိုခက်တယ်။ စုဆောင်းခြင်းသည်ကောက်ယူစုဆောင်းခြင်းထက် ပိုမို၍ ခက်ခဲသည်ဆိုပါက "အမဲလိုက်ခြင်း" အကြောင်းပြောကြသည်။
အဆိုပါပိုကြီးစိုက်ပျိုးအတွက်ပေါင်းစည်းမပေးပါ။ ပိုလျှံသည်၎င်း၏ကြီးထွားနေစဉ်အတွင်းအပိုကိုမသိခဲ့ပါ။ ပြည့်လျှံနေခြင်းသည်ချမ်းသာသော်လည်းအချို့သည်တစ်ခါတစ်ရံလှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ရာအလွန်အကံျွအသုံးချခြင်းသည်အသုံးမကျရုံသာမကသက်ရှိသတ္တဝါ၏တိုးတက်မှုကိုလည်းဟန့်တားစေသည်။ အဆိုပါပိုရုံအမှိုက်သရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
Hugo မှာပြproblemနာရှိတယ်။ မိမိအထူးဆန်းသောဇာတ်ဆောင်ကသူ့ screen ပေါ်မှာသူ့ကိုနှောင့်အယှက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါက Hugo အရူးမောင်း။ ဟူဂိုသည်သူ၏မျက်နှာ၌ဆယ်စုနှစ်များစွာအပြစ်အနာအဆာများရှိသည်။ မှန်ရှေ့တွင်ရပ်။ သူ၏အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်သည်ဘူးသီးကိုမဖယ်ထုတ်မှီတိုင်အောင်သူ၏မျက်နှာဖုံးကိုကြည့်ခဲ့သည်။ Hugo quirks နှင့်အတူ quirk ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ် ဦး ချင်းစီ quirks များအတွက်။ အရာရာတိုင်းဟာလုံးဝခြစ်နေတဲ့ပြတင်းပေါက်လိုမျိုး quirk တွေရှိမယ်ဆိုရင် Hugo ကစိတ်မဝင်စားပါဘူး။ Hugo တကယ်ပြaနာတစ်ခုရှိပါတယ်။
အချည်းနှီးသောအတွေးကသူ၏သွေ့ခြောက်နေသောဆီးနှင်းကိုကျွေးမွေးသည်။ မီးခိုးရောင်ဆီးနှင်းအမျိုးသမီးကို neurosis လို့ခေါ်တယ်။ သူမသည်လုံးဝအန္တရာယ်ကင်းပြီးသူမသည် Woody Allen ဖြစ်သည်။ သငျသညျ neurosis အကြောင်းရယ်မောနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ဆီးနှင်းဟောင်းကတကယ်အန္တရာယ်မရှိဘူး။ ဆီးနှင်းအမျိုးသမီးတွင်မည်သည့်သွေးမျှမစီးပါ၊ သို့သော်မနေ့က၏နှင်းသည်ပျင်းရိနေသည်။ ဆီးနှင်းဟောင်းသည်စိတ်ကိုကုထုံးဖြင့်ကုသသည်။ ထိုသို့သောကုထုံးသည် neurosis တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ဆီးနှင်းအသစ်များကဲ့သို့အဖြူရောင်ဖြစ်သည်။
ခွေးနှင့်ကြောင်သည်စုံတွဲကုထုံးသို့သွားသည်။ အဆိုပါကုထုံးတစ် ဦး hyena ဖြစ်ပါတယ်။ ခွေးနှင့်ကြောင်တို့သည်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုကယ်တင်ချင်ကြသည်။ ကုသမှုမအောင်မြင်ဘူး ဘာကြောင့်လဲ အဲဒါဘာဖြစ်နိုင်လဲ ဆက်ဆက်ဟာကုထုံးအပေါ်, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သူတို့ကိုယ်သူတို့ပြproblemနာရှိသည်။
Cheplin သည်သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကုမ္ပဏီကိုထိန်းသိမ်းရန်မြေအောက်ခန်းတွင်ရယ်သည်။ သူသည်လူများစွာကိုငွေရရန်သတ်ပစ်ရသည်။ ဒီကမ္ဘာနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုပပျောက်အောင်မလုပ်ရဘူး။ Cheplin သည်ဂျာမနီတစ်ခုလုံးအတွက်ဟာသကိုတားမြစ်ရန်ယေဘူယျအားဖြင့်တားမြစ်ထားသည်။ ခြွင်းချက်များမှာရယ်စရာစင်တာများဖြစ်သည်။ ဟာသအခကြေးငွေပေးပြီးနောက်တွင်လူတို့သည်ကျယ်လောင်စွာရယ်မောနိုင်သည်။
ရယ်မောခြင်းသည်သူ၏နှုတ်ခမ်းနှင့်အတူပျော်ရွှင်သည်။ ပြင်းထန်သောရယ်မောခြင်းကရယ်စရာကောင်းသည်။ ဟာသရယ်ရယ်မောခြင်းသည်သာမန်လူများ၏ဆိုဖာမှထ။ မရပါ။ စစ်မှန်တဲ့ရယ်မောခြင်းကရယ်စရာမဟုတ်ပါဘူး၊ အနိုင်ကျင့်သောပြက်လုံးများသည်သာလျှင်ဆင်းရဲဒုက္ခသစ်ပင်မှပြက်လုံးများကိုပြိုကွဲစေသည်။
Isolde: Detlef၊ မင်းကနောက်နေတာလား၊
Detlef: အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။ ငါပျော်မယ်ဆိုရင်ငါလေးလေးနက်နက်နဲ့လေးနက်တယ်ဆိုရင်အဲဒါကပဲ။
Detlef: ပထမတစ်ခုသည်ပင်ရက်များနှင့်နောက်တစ်ခုမှာထူးဆန်းသည့်နေ့များဖြစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ပတ်ပတ်လည်အခြားလမ်းခဲ့သလဲ ငါလုံးဝရှုပ်ထွေးနေပါတယ်
အလှမယ်ဒေါက်တာ Kackebart-Struller: အော့တို! သင်အမှန်တကယ်အိုဇုန်းလွှာကိုဘာတွေလုပ်နေလဲသိလား fart ကျန်ပြီးတဲ့နောက်သင်၏ asshole ပိုကြီးလာရုံသာမကအိုဇုန်းလွှာလည်းပါလာသည်။ ရေငတ်ခြင်းတစ်ခုစီတိုင်းသည်ကမ္ဘာမြေကိုအပူပေးသောလေထုထဲသို့မီသိန်းကိုစီးဆင်းစေသည်။ မခိုးပါနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။
အော့တို Struller - သင်မှန်ပါတယ်၊ Mausi ။ ငါခိုအစာကျွေး, ယခုထပ်ခိုးသွား။
တောရိုင်းသစ်တောတွင်သစ်ပင်များ၏အမြစ်များသည်သူတို့၏မြေဆီလွှာကိုစွန့ ်၍ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းသို့ပျံ့နှံ့သွားသည်။ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာမပြန်ပါဘူးဒါပေမယ့်စွန့်စားမှုအပေါ်တတ်၏။ တောင်တန်းတွေကိုဖြတ်ပြီးချိုင့်ဝှမ်းတွေထဲကိုဝင်သွားတယ်။ တခါတရံသူမလည်းခုန်။
လှိမ့်သို့မဟုတ်လှည့်ပတ်သည်၎င်း၏ဗဟိုပတ်ပတ်လည်တစ်လှည့်လည်၏လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဘီးဖမ်းမိပြီ လိပ်သည်သူ့ဟာသူမလှိမ့်ပါ။ ၎င်းသည်၎င်း၏အလယ်ဗဟိုနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ အကယ်၍ လိပ်သည်စက်ဝိုင်းတစ်ခုမှစတုရန်းသို့ရွှေ့လျှင်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားလိမ့်မည်။ ဘီးသည်ရှုခင်းကိုဖြတ်ကျော်နေသည်ကိုသတိပြုမိပြီးဘီးသည်ရပ်တန့်သွားသည်။
တိတ်ဆိတ်စွာ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာအတော်ပင်။ ကြွင်းသောအရာအားကြွင်းသောအရာအားပြင်ပလှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဒစ္စကိုတွင်အနားယူခြင်းမရှိပါ။ တစ်ခုခုတော့အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာ။ အတွင်းမှအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာဖြင့်လှုပ်ရှားမှုသည်အတော်လေးဖြစ်နိုင်သည်။ တည်ရှိမှုသည်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိသည်။ ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွင်မငြိမ်မသက်ငြိမ်သက်မှုလည်းရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအေးဆေးတည်ငြိမ်မှုသည်မြေကြီးပေါ်ရှိသေခြင်းကိုခံပြီးသေခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ စစ်မှန်တဲ့အေးဆေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုဟာလွတ်လပ်ခြင်းမှာနေတယ်။
ငှက်ဖျားသည်လူများလည်ပတ်နေသောပျော်စရာနန်းတော်သို့ပျံသန်းသည်။ သရဖူမရှိသောလူ ၅၂ ယောက်တို့သည်နန်းတော်တွင်နေထိုင်ကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာဘုရင်နှင့်လူမိုက်တစ်ယောက်မျှမဟုတ်ပါ။ နန်းတော်မှလူအားလုံး hermaphrodite ဖြစ်ကြသည်။ မင်းလုပ်ချင်ရင်မင်းကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်မှာပါ ဒါပေမဲ့သူတို့ကဂိမ်းလောကကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်၊ spooling လေးနက်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကဒီမှာ Jojos, ဘုရင်များနှင့်အတူနောက်နေနေကြသည်။ ဘုရင်များသည်သူတို့၏သရဖူများကိုမိုက်မဲသောသူများအဖြစ်စမ်းချောင်းကြီးအောက်ရှိခန်းမကြီးတွင်ချခဲ့ကြသည်။ သရဖူသည်ပျားငှက်များအတွက်အသိုက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ King Purple ကလေးနက်တဲ့အနတ္တကိုရေးသားခဲ့သည်။ မင်းအဲဒီလိုလူတစ်ယောက်နဲ့စကားမပြောနိုင်ဘူး။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျောရိုးအစားအစား, အလုပ်ကမာနကြီးတဲ့အလှဆင်တဲ့ရင်ဘတ်တစ်ခုရှိတယ်။ သင်၏ဖြည့်ဆည်းမှုသည်နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုတွေ့နိုင်သည်။ အလုပ်လုပ်သူများသည်မြေအောက်ခန်းရှိသူတို့၏အလောင်းများကိုအလျင်အမြန်မေ့သွားနိုင်သည်။ အလုပ်ကရွေးနှုတ်ခြင်းအတွက်အလွန်တောင့်တသော်လည်း၊ အလုပ်ကမျက်စိကန်းသည်၊ ၎င်းသည်အလုပ်လုပ်နေသည်ကိုသတိမပြုမိဘဲသိသည်။ ရွေးနုတ်ရှင်အဖြစ်ခရစ်တော်သည်ကြာမြင့်စွာကတည်းကရှိနေခဲ့သည်။ လူများသည်အလုပ်မှမိမိတို့ကိုယ်ကိုရွေးနုတ်ကြသည်။
စစ်မှန်သောလှုပ်ရှားမှုသည်အတွင်းပိုင်းဖြစ်သည်။ မြင်းတစ်ကောင်သည်သူ့ဟာသူလှုံ့ဆော်ပေးသည်၊ သို့သော်ကားတစ်စီးကို၎င်း၏အင်ဂျင်၏စွမ်းအားကြောင့်မောင်းနှင်သည်။ လှုပ်ရှားမှုသည်အထူးသဖြင့်လှိုင်းများ၌မြွေတစ်မျိုးဖြင့်ရွေ့လျားလေ့ရှိသည်။ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊ ယနေ့ခေတ်သင်အဓိကအားဖြင့်ပတ်ပတ်လည်ရ။ မင်းလည်းအဲဒီကိုရွှေ့နိုင်တယ် သို့သော်မည်သူမျှ၎င်းကိုဆိုက်ပေါ်တွင်မခံရပ်နိုင်ပါ။ သင် site ပေါ်တွင်နေဖို့။
လေသည် Frigg ၏မျက်နှာကိုလှုပ်ခတ်သွားသည်။ အချိန်ကကုန်နေပြီ။ ရေကတွင်းထဲကိုကျသွားတယ်။ အရာအားလုံးအပြေးနေသည်၊ ဆီးသွားပြီးမျက်ရည်တွေစီးကျလာတယ်။ Frigg နဲ့လေဘယ်သူမှဘယ်သူမှမရှိဘူး။ သူ့ခြေထောက်တွေကိုဖိနပ်ထူထူနဲ့ဖုံးတယ်။ သူမရှင်းလင်းသောခြေလျင်သွားလျှင်ကော။ ထိုအခါလေသည်သူတို့ကိုတက်သယ်ဆောင်နှင့် Frigg လွတ်လိမ့်မယ်။ သူမရဲ့ဖိနပ်လေးကသူမရဲ့အတိတ်ကဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်သည်။ Wahuna လို့ခေါ်တဲ့လေဟာသူ့ဆံပင်တွေကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားတယ်။ Sleipnir (၈) လက်မြင်းသည် Frigga ကိုဖြတ်ကျော်သွားသည်။ Frigga ကိုသဘောကျသည်။ သူမအားမြင်းရထားဖြင့်လေဘုရား၌ထားနိုင်ပြီး၊
စက်ကအသန့်စင်ဆုံးပါ။ စက်တစ်လုံးသည်ဘာမျှမခံစားရပါ၊ ဒါဟာတုံးအလုပ်သမားတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ခဲ့တာတွေပါ။ ခံစားမှုနှင့်ဘဝမပါ ၀ င်မှု၊ စက်ပြင်၊ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘဲလှုပ်ရှားမှု၊ ရည်ရွယ်ချက်သာဖြစ်သည်။ စက်တစ်လုံးသည်ငါတို့အတွက်မိုက်မဲသောအလုပ်ကိုလုပ်သောအခါမည်မျှကောင်းလိုက်သနည်း။ ဒါပေမယ့်စက်တွေကိုတီထွင်ခဲ့သူတွေဟာတစ်ချိန်ကမိုက်မဲမှုတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်စိုက်ခဲ့တယ်။ စက်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုအပြင်ကနေသူတို့ရဲ့မိုက်မဲမှုနဲ့ဆက်ပြီးအနိုင်ကျင့်မှာပါ။ ဉာဏ်ရည်တုကိုခွဲခြားထားသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်မိုက်မဲဆဲဖြစ်သည်။ ငါတို့ကိုယ်တိုင်သည်ကမ္ဘာ့စက်ကြီးတစ်ခု၏အသံမျှသာဖြစ်သည်။
ပိုင်ရှင်ကသူ့လက်ကိုသူ့အားခေါ်သည်။ သူ၏လက်များအက်တမ်များသည်ပိုင်ရှင်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ သူ့လက်ထဲရှိအက်တမ်များသည်သူ၏အတ္တကိုချေးငှားရန်သာသင့်တော်သည်။ ပိုင်ရှင်သေဆုံးပြီးနောက်သူ့လက်ထဲရှိအက်တမ်များသည်အခြားအသွင်အပြင်တစ်ခုအတွက်သင့်တော်သည်။ ပိုင်ရှင်ကသူ့လက်ထဲမှာအိမ်မှာနေတယ်၊ ​​သူကသူ့လက်ထဲမှာအမြစ်တွယ်နေတယ်။ ဤအမြစ်သည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ဒါဟာကိုယ်နှိုက်ကမဟုတ်ပါဘူး။
ပန်းသီးတွင်အခွံနှင့်ပျော့ဖတ်အတူတကွနေထိုင်ကြသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးလက်ထပ်ကြသလား။ ပန်းသီးတွင်အတူတကွနေထိုင်ကြသည့်အရာမှာစက်လုံး၊ အစိမ်း၊ အသီးနှင့်သစ်ပင်ပေါ်တွင်ချိတ်ဆွဲထားခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ပန်းသီးက 'ငါ၌ဂုဏ်သတ္တိများရှိသော်လည်းငါ့မှာမူပိုင်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဂုဏ်သတ္တိများရှာပေမယ့်ဘာမှမရှိဘူး။ '' ပန်းသီးကဒီအသိပညာကိုဒေါသထွက်သည်။ ငါတောင်မှမရှိသေးဘူး! '' ပန်းသီး၏ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုစီသည်ယခုအခါသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတိုင်းလျှောက်သွားသည်။ လုံးသည်မြောက်ဘက်သို့သွားပြီးအစိမ်းသည်တောင်ဘက်သို့သွားသည်။ အရှေ့ဘက်မှသစ်သီးများနှင့်ပန်းသီးကိုအရှေ့ဘက်သို့ဆွဲထားခြင်း။ ၎င်းသည်ပန်းသီးတစ်လုံးမဟုတ်တော့ပါ၊ ပန်းသီးဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုကွာရှင်းလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။သူကသူ့သ ၀ ဏ်ပိုင်များထဲမှနှင်ချခံလိုက်ရသည်။ ပန်းသီးရဲ့လတ်ဆတ်တဲ့နေရာဘယ်မှာလဲ။ သူမသည်အရက်ဆိုင်၌ထိုင်နေသည်နှင့်ပြေးနိုင်ပါတယ်!
ကဗျာဆိုသည်မှာအဓိပ္ပါယ်ကိုယင်း၏အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်သို့ချုံ့ရန်ဆိုလိုသည်။ သို့သော်စာရေးသူ၏ကဗျာကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်တံဆိပ်ခတ်။ စာဖတ်သူသည်အဓိပ္ပာယ်လေးထောင့်ကွက်ကိုမဖွင့်နိုင်တော့ပါ။ သူရေးသားနေစဉ်ကဗျာ၏အကြောင်းအရာကိုစာရေးသူသာနားလည်သည်။ စာရေးသူရဲ့လုပ်နိုင်တာကနောက်တစ်နေ့မနက်မှာအရမ်းတင်းကျပ်နေတယ်။
သိသာထင်ရှားတဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုတာကိုဖုံးကွယ်စရာမလိုဘဲလွတ်လပ်စွာပျံသန်းနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။ တွင်းများသည်အဓိကအားဖြင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည်။ မြင်ကွင်းကျယ်လေးလံနိုင်သော်လည်းကြည့်ရှုရန်မလွယ်ကူပါ။ ညံ့ဖျင်းသောအခါပွင့်လင်းမြင်သာမှုဖြစ်လာသည်။
Catch သည်၎င်း၏သားကောင်အတွက်မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်အောင်မြင်သည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်အထူးသဖြင့်ဖမ်းမိသောငါးများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ချောနေသောကြောင့်ရွေ့လျားနေသောရေတွင်နေထိုင်ကြသည်၊ သို့သော်ဖမ်းဆီးနိုင်သေးသည်။
သင်ဖမ်းမိခြင်းမရှိလျှင်ရာဇ ၀ တ်မှုများသာအကျိုးရှိသည်။ အမှားမလုပ်မိရင်တောင်မျောက်ကလေးတစ်ကောင်ရောက်လာတယ်။ တိရစ္ဆာန်ရုံသည်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်သင့်တော်သောထောင်ဖြစ်သည်။ အချို့သောတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များသည်ဆပ်ကပ်တွင်ထောင်ချခြင်းခံရသည်။ ကလေးများသည်မိဘများသင်ကြားပို့ချမှုထောင်ထဲတွင်ထိုင်ကြသည်။ ဇနီးများသည်သူတို့၏ခင်ပွန်းများအပေါ်ငွေရေးကြေးရေးမှီခိုမှုဖြင့်ထောင်ကျနေသည်။
လျှို့ဝှက်ချက်သည်အခြားသူများ၏မျက်စိကိုမမြင်ရပါ ပွဲတော်များ၊ ၀ မ်းမြောက်ခြင်း၊ မှားယွင်းသောအရာများပြောင်းလဲခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ အခြားသူများကိုလောင်ကျွမ်းခြင်း၊ သင်ပြုံးရယ်ခြင်း၊ ကြောက်ခြင်းဖြစ်ခြင်း၊ ၎င်းသည်သူ့ဟာသူကာကွယ်ပေးသည်၊ ငြင်းဆန်သည်သို့မဟုတ်ကလေးတစ်ယောက်ရှိသည်။ လျှို့ဝှက်ချက် - ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်သလဲဆိုတာမသိဘူး။ ဒါကလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ပျံသန်းခြင်းသည်ခြေမပါဘဲကျယ်ပြန့်သောပင်လယ်ကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားသည်။ ပျံသန်းရာတွင်ထိပ်နှင့်အောက်ကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆန့်ကျင်သည်။ ငှက်တစ်ကောင်သည်ကမ္ဘာကြီးကိုအဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းမပြုဘဲစွမ်းအားရှိသည်။ ဒါကပါရမီပါပဲ။ သို့သော် Toadstools များသည်ပျံသန်းခြင်းမပြုနိုင်ပါ၊ အတောင်များသည်လည်းထူးခြားသည်။ ငှက်တို့၏အတောင်များသည်ရဲရင့်ခြင်းသို့ရောက်သည်။ သူတို့ကအိမ်မှာရှိတယ်။ အတောင်ပံများသည်ပျံသန်းသည့်လက်များဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်အင်အားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ငှက်တစ်ကောင်သည်လေထဲတွင်ကြောင်နှင့်မတိုက်မိဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျံသန်းနိုင်သည်။ သို့သော် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး သည်သူ၏သူဌေးနှင့်သို့မဟုတ်ဘဝ၏လေးနက်မှုနှင့်အလျင်အမြန်တိုက်မိသည်။
အလင်းသည်ပဟေoverိများပေါ်တွင်အလွယ်တကူပျံနိုင်သည်။ အလင်းကိုထိပ်မှာတွေ့ရလေ့ရှိတယ်။ သစ်သားသည်ရေထက်ပိုပေါ့သောကြောင့်ရေပေါ်တွင်မျောနေသည်။ လေပူဖောင်းသည်ကောင်းကင်ပြာကြီးတွင်မျောနေသည်။ အလင်းသည်လျင်မြန်စွာပြိုကွဲသွားသည်။ မိုက်မဲသောအရာသည်အလွယ်တကူဖြစ်လာသည်။
နှင်းခဲတစ်လုံးဂရုတစိုက်ကျတယ်။ ဆိတ်ငြိမ်နေတယ် အဆိုပါအလွှာအခြားကမ္ဘာမှလာသည်။ ၎င်းသည်ဤကမ္ဘာကြီးကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့မဟုတ်ပါကသံလိုက်စက်ကွင်းအားလုံးပြိုလဲသွားလိမ့်မည်။ မြောက်နှင့်တောင်ဝင်ရိုးစွန်းတွင်သံလိုက်စက်ကွင်းသည်ဆီးနှင်းထဲသို့ကျသည်။ ကမ္ဘာ့ဝင်ရိုးစွန်းမှနှင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လျှို့ဝှက်ပြောင်းလဲမှုများကိုစီစဉ်သည်။ ၎င်း၏သံလိုက်သည်ကမ္ဘာ့နေထိုင်သူများကိုပျံ့နှံ့စေသည်။
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဟာကောင်းတဲ့အရာပါ။ ကာကွယ်မှုသည်သင်ပထမ ဦး ဆုံးလိုအပ်သည်မှာ - ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာကာကွယ်မှု၊ ခန်းမကာကွယ်ခြင်း၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးထုတ်ကုန်များ၊ မင်းစိတ်ကိုအကာအကွယ်မပေးသေးဘူးလား။ ဒါဟာလာစောင့်ပါလိမ့်မယ်။
Digest မဂ္ဂဇင်းဝါးနှင့်ဝါးနှင့်ဝါး။ Digest သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အသားများထဲသို့ပေါင်းထည့်နိုင်သည်။ သို့သော်အစားအစာအမြဲနည်းနည်းအဆိပ်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာသည်အဆိပ်ရှိ၏။ ငါတို့အိမ်မဟုတ်ဘူး။ တိရိစ္ဆာန်များသည်လူသားများထက်ပိုမိုအစာကြေနိုင်ပြီးသူတို့သည်ကမ္ဘာမြေနှင့်နီးကပ်စွာနေထိုင်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ရပ်နေသောအရာကိုကမ္ဘာမြေဟုခေါ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံကြမ်းပြင်ဟုခေါ်သည် ရပ်နေနှင့်မြေကြီးမြဲမြံသည်။ ကမ္ဘာမြေဟူသည် humus (သို့) ကျောက်တုံးကိုဆိုလိုသည်။ အထူးသဖြင့်ကမ္ဘာမြေကြီး၏ ၀ တ္ထုများသည်အထူးသဖြင့်ထုထည်ကြီးမားပြီးလေးလံသည်။ ကြမ်းပြင်သည်ငြိမ်းချမ်းသည်၊ ကြမ်းပြင်မှာမိုက်မဲသည်။ ကြီးမြတ်တဲ့မိခင်မှာမျက်နှာမရှိဘူး။ သူမမှာနွေးထွေးမှုရှိပါသလား အမြစ်သည်မြေကြီးထဲသို့၎င်း၊ သူတို့သည်လည်းမြေကြီးကိုနားလည်ကြ၏။ အမြစ်သည်ကမ္ဘာ၏အေးဆေးတည်ငြိမ်သောတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပျားများသည်အတွင်းပိုင်း၌အရာ ၀ တ္ထုအတွင်းနေထိုင်သည်။ ပျားတစ်ကောင်သည်အေးသည့်နေရာအပြင်ဘက်သို့သွားသည်။ ဒါဟာဆီးနှင်းကဲ့သို့သေပြီ။ ပျားများသည်သူတို့၏အတွင်းပိုင်းကိုအအေးခန်းများအဖြစ်ဖော်ပြကြသည်။ နှင်းခဲနေ သ၍ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်အချိန်ဖြစ်သည်။ ယင်းအလွှာသော်လျှင်, အထီးကျန်ဆန်အဝတ်အချည်းစည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဝတ်ရည် slurping, ပျားကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးချိတ်ဆက်နှင့်ဆွဲငင်အားကျွမ်းကျင်သူတို့ဆွဲငင်အားဝါး။ ဝတ်ရည်သည်မဖတ်ရသေးသောစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ မပင်၎င်း၏ရေးသားသူအားဖြင့်။
လေးလံခြင်းသည်များသောအားဖြင့်ပမာဏကြီးမားသည်။ သို့သော် ဦး ဆောင်မှုအရ ၀ န်လေးခြင်းသည်သေးငယ်သည်။ ကြီးမားသောစွမ်းအားများ။ ၎င်းသည်၎င်း၏ဒြပ်ထုကြောင့်သာအရောင်အားဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လေးလံမှုသည်အလွန်မှောင်လွန်း။ အရောင်များဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါမိုးသည်းထန်စွာရယ်စရာနားမလည်ဘူး ရယ်စရာကောင်းပြီးလေးလံသောအတူတူသကြားထဲတွင်သာအိပ်စက်နိုင်သည်။ မြေထုဆွဲအားသည်အထက်မှဖြစ်စေအောက်မှလာသလော။ အပူပိုမိုအားကောင်းလာသောအခါဆွဲငင်အားဖြစ်လာသည်။ သင်လှိမ့်မပေးနိုင်သောကျောက်တုံးနှင့်ကော? အရမ်းလေးလား၊ အရမ်းရက်စက်တယ်! Heaviness ရက်စက်မှုထက်ပျော့ပြောင်းသည်။ အဲဒါလွယ်ကူလား။ ဒါပဲ!
သစ်ပင်များနှင့်အိမ်များကိုလေတိုက်ခတ်သွားသည်။ လေ၏စွမ်းအားကိုမမြင်ရပါ။ ၎င်း၏သက်ရောက်မှုများကိုသာတွေ့နိုင်သည်။ လေသည်ထင်းကိုမှုတ်။ ၊ လေထ။ မီးဖိုပြာ၌လွင့်သွား၏။ လေသည်အလွန်ခဏလေးပင်။ ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းမှုတ်
အိမ်ခြံမြေထူးခြားသည် ဒါဟာသူ့အရာမှပိုင်ထိုက်သောဖြစ်ပါတယ်။ နှိုင်းယှဉ်မှုမှတိုင်းတာသည်ပမာဏနှိုင်းယှဉ်သည်။ ပိုင်ရှင်မရှိပါ။ Isolde မှာဝမ်းဗိုက်ကြီးနေတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကအဆီကိုမပိုင်ဘူး။ ဘာမှမတွေအများကြီးအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါဟာအိုင်းစတိုင်းရဲ့ ဦး နှောက်ဘယ်လောက်အက်ကြောင်းအရေးမထားဘူး။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်၏သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်သည်၊ ၎င်း၏အက်ကွဲမှုအရေအတွက်မဟုတ်ပါ။ ပန်းသီးနှင့်သစ်တော်သီးများကိုသူတို့၏အလေးချိန်မျှသာနှိုင်းယှဉ်။ မရပါ။
ကျောက်တုံးအပိုင်းအစတွေကိုသဲလို့ခေါ်တယ်။ သဲအပိုင်းအစများသည်အလွန်သေးငယ်သောကြောင့်အထီးကျန်နေသောအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုအနေနှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းလာသည်။ သဲထို့နောက်တစ်ခုလုံးအဖြစ်ခံစားရတယ်။ အရာအားလုံးကငိုနေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့သဲကအရမ်းခြောက်လို့မငိုတော့ဘူး။ ကျောက်ခဲများ၌သွေးမရှိ၊ သဲမရှိသကဲ့သို့သဲထဲ၌မရှိ။ ဝမ်းနည်းဖွယ်ကုမ္ပဏီကြီးများ၏မျက်ရည်များကပင်လယ်ဆားငန်ရေကိုလှူသည်။ ထို့ကြောင့်သဲများကိုပင်လယ်ရှိသည့်ကမ်းခြေတစ်ခုအဖြစ်မကြာခဏတွေ့ရသည်။
လူများသည်အများကိန်းတွင်သာတည်ရှိသည်။ လူတစ်ယောက်ဟာတစ်ယောက်တည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ လူသည်နွားတိရစ္ဆာန်အဖြစ်လူ '' လူ 'ဖြစ်လာသည်။ လူအုပ်ကြီးတွင်လူများပါဝင်သည်။ လူများတို့၏အသွေးသည်သူတို့အမျိုးအနွယ်တို့၏အသွေးဖြစ်သည်။ လူတစ် ဦး သည်အခြားတစ်ဖက်တွင်မိမိ၏သွေးလည်ပတ်မှုရှိသည်။ ဂျူးဟောင်းများနှင့်အတူအာဗြဟံ၏အသွေးသည်သူ၏မြေးမြေးများအထိစီးဆင်းသွားသည်။ လူများနှင့်ရှေးကသြောလူများသည်အုပ်စုထဲတွင်သူတို့နှင့်မတူ၊
ဗာဗုလုန်သည်ကလေးငယ်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်အမြင့်ဆုံးအတွက်ကြီးလွန်းသည်။ နယူးယောက်ရှိမိုးမျှော်တိုက်များလည်းရှိသည်။ သို့သော်အကြမ်းဖက်သမားများက၎င်းတို့အားဘုရားသခင်အားခြစ်ရာခြစ်ခြစ်ချင်သောကြောင့်ဖျက်ဆီးပစ်ရမည်။ မင်းရဲ့ရွှေနွားရုပ်၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့အလှကုန်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တို့အတွက်ကခုန်ခြင်း။ နောက်ဆုံးဘုရားသခင့်အမျက်တော်ဘယ်တော့လာပြီးအပြစ်ပြုသူတွေကိုအမှိုက်ပုံးထဲပစ်ချမလဲ။
Fred သည်ညအချိန်တွင်ဂျီနီဗာမြို့အနီးရှိအမှုန်အရှိန်မြှင့်အရှိန်ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ၀ င်ရောက်ခဲ့ပြီးယခုအခါပတ် ၀ န်းကျင်သို့တွားသွားနေသည်။
အစိမ်းရောင်အမှုန် - ခေါင်းကိုက်နေလို့မကောင်းဘူး၊ ခေါင်းကိုက်တယ်။ ရူပဗေဒပညာရှင်တွေကကျွန်တော့်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကတည်းကကမ္ဘာကြီးကိုတကယ်မရက်နိုင်တော့ဘူး။ နိုင်ငံရေးတောင်မှထိန်းချုပ်မရတော့ဘူး။
အနီရောင်အမှုန်သည်အတိတ်ကိုပျံသွားသည်။ ၎င်းသည်လျှာကိုကပ်လိုက်သည်၊ ၎င်းသည်အမှုန်များထက်အနီရောင်ပင်ဖြစ်သည်။
အနီရောင်အမှုန်: ငါမြည်းအောက်မှာပိုက်ဆံထွန်းတယ်။ များသောအားဖြင့်ငွေသည်သတင်းအချက်အလက်မျှသာဖြစ်သည်။ ငါ့မီးသတင်းအချက်အလက်တန်ဖိုးကိုပေးသည်။ တြိဂံတစ်ခုကပျံသန်းနေတယ်၊ ​​နဖူးမှာမျက်စိရှိတယ်။
တြိဂံ - ငါကအကြီးဆုံးအမှုန်ဖြစ်တယ်။ တကယ်တော့သေးငယ်တဲ့အမှုန်တွေဟာရူပဗေဒငရဲမှာပဲရှိတယ်။ နည်းနည်းတော့လက်တွေ့မကျဘူး။ ပိုမိုပြည့်စုံသောအရာများဖြစ်လာလေ၊ - Fred သည်အလွန်အံ့အားသင့်သွားသည်။
ပရမ်းပတာဖြစ်သည့်အပြင်အခြားသူများသည်စိတ်ကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်။ ကမ္ဘာသို့မရောက်ရှိနိုင်အောင်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်သည်။ ပရမ်းပတာရောင်စုံဖြစ်ပါတယ်။ Chaos သည်အမှိုက်သရိုက်များကိုအတိတ်မှဖယ်ရှားပေးသည်။ ပရမ်းပတာကခုန်ပြီးဘာကိုမသိလဲ
အရေးအသားတွင်ဘာသာစကားသည်အသံ၌တိတ်ဆိတ်စွာနေသည်။ သို့သော်သတိတွင်တောက်ပနေသည်။ စာရေးဆရာတွေဟာသေချာတာပေါ့။ အရေးအသားသည်အမြဲတမ်းရေးသားခဲ့သည်။ အဆိုပါအရေးအသားသည်နောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးကောင်းသောစပျစ်ရည်ထက်ကြာရှည်ခံသည်။ အဆိုပါစကားလုံးကိုခပ်သိမ်းသောကာလမှတဆင့်ရေးသားခဲ့သည်။
ကခုန်ရဲသည်။ မည်သူမဆိုကခုန်သောသူသည်ရူး၏။ သငျသညျမဆင်မခြင်လူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ကခုန်လည်းအေးမြနိုင်ပါတယ်။ တွေးခေါ်သူများကမခုန်သင့်ပါ။ အဆိုပါကခုန်စိတ်သူမ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားကွဲ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအစာမရှိခြင်းအတွက်အပူတပြင်း, ကျားအဖြစ်ရူးသွပ်မကောင်းတဲ့အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုစား: Sweet Miezi Fressi-Fressi လုပ်!
မျက်ရည်ကျမှုသည်ကောင်းကင်မှကျသည်။ သူတို့သည်ကမ္ဘာမြေပေါ်သို့မြစ်ချောင်းများစီးဆင်းနေသောမြစ်ချောင်းသို့စုရုံးကြသည်။ Erwin ကနူးလှေကားမှာထိုင်ပြီးမျက်ရည်စက်လက်နဲ့လှော်ခတ်သည်။ မြစ်ကုန်းမြင့်တက်လာတယ်။ Wotan ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်မြစ်ညာဘက်ကမ်းတွင်မီးလောင်သည်။ လက်ဝဲဘက်ခြမ်းတွင်ငှက်တစ်ကောင်ထိုင်နေသည့်သစ်ပင်တစ်ပင်ရှိသည်။ Erwin သည်ကနူးလှေပေါ်တွင်ကုန်းတက်နေဆဲဖြစ်သည်။ အခုနှင်းကျနေပြီ။ ကနူးလှေသည်ထင်းရှူးပင်များကြားရှိနှင်းလျှောစီးနေသူကိုတွေ့ရသည်။ နှင်းပွင့်လေး၏မျက်လုံးများသည်အသက်ရှင်နေပြီး၎င်းတို့သည်အစွမ်းထက်သောဝက်ဝံရုပ်၏မျက်လုံးများဖြစ်သည်။ Erwin မြစ်ကိုတက်တက်လှော်ဆက်လက်။ လက်ဝဲဘက်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်စောင်းတီးနေသည်။ ဘုရားသခင်သည်နီးကပ်သည်။
ရောင်စုံ splinters နှင့်အတူအနက်ရောင်ရှိအမျိုးသမီးတစ် ဦး အေးမြနှင့်တိုက်။ သူတို့ကကြယ်များ၊ ကြယ်များကြား၊ ကြယ်များအကြားအတူတကွပျံသန်းကြသည်။ တိုက်တဲန်းနစ်၏ဘဝသည်နစ်မြုပ်သွားသည်။ စက္ကူခေါက်နေသောလှေတစ်စီးသည်ရေထဲ၌ရေပေါ်မျောပါသွားပြီး၎င်းသည်ရွှံ့ရေများရှိသည့်စမ်းချောင်းသို့ ဦး တည်သွားသည်။ Peng! ပြာသည်အထက်မှကျသည်။ နောက်ဆုံးတော့Eyjafjallajökullကွဲထွက်သွားတယ်။
ဆန့်ကျင်တွင်, မထိုက်မတန်မေတ္တာအဖြစ်တွေ့ရှိရသည်။ ဆက်စပ်သောအရာတစ်ခုအနေဖြင့် Fit သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထပ်တူထပ်တူဝန်ဆောင်မှုကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။ အရာအားလုံးတစ်ခုတည်းဖွဲ့စည်းပုံမှာအတူတကွကိုက်ညီ။ ဘီယာ၊ စီးကရက်နှင့်ပြာမှုန်များသည် Mr. Alki ၏မီးဖိုချောင်စားပွဲပေါ်တွင်ရှိသည်။ ဒါကသဘာဝကျပါတယ်, ကကိုက်ညီ။ မစ္စတာ Alki ၏မီးဖိုချောင်စားပွဲပေါ်မှာဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ Hinz နှင့် Kunz တို့သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကတ်တလောက်တွင်ရှိသည်။ Hinz နှင့် Kunz တို့သည်၎င်းတို့တည်ရှိရုံမျှဖြင့်သာဆက်နွှယ်လျက်ရှိသည်။ အင်တာနက်ဟာဖွဲ့စည်းပုံမဟုတ်ဘူး၊ အနတ္တ။
တစ် ဦး ကအရာသည်၎င်း၏ဖြစ်လျက်ရှိအတွက်မီးခိုးရောင်ဖြစ်၏ နောက်တဖန်မပေါ်မရှိ။ အရာတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးမဆန်ဘူး ကမ္ဘာကြီးကိုအုပ်စိုးနေသောကမ္ဘာ၏အရာ၊ အရာကမ္ဘာကြီးကိုအရာမှတက်ပုံ။ စာတန်သည်ဤလောကကို၎င်း၏လက်သည်းများ၌ကြာမြင့်စွာကတည်းကရှိခဲ့သည်။ သက်ရှိများကိုသူတို့ရွေ့လျားသောကြောင့်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်လူငယ်တစ် ဦး သည်သူ့ဟာသူလှုပ်ရှားနိုင်သည်။ အဲဒါကိစ္စတစ်ခုပါ
အတိုင်းအဆမဲ့ဖော်ရွေသောနတ်ဘုရားများကမေတ္တာဖြင့်ဖုတ်ထားသည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဆရာတစ် ဦး အနေဖြင့်ဖျားနာမှုကကျောင်းသားအားအာဏာမှကန့်သတ်သည်။ ထို့နောက်ကျောင်းသားသည်ပြည့်နှက်နေသည်။ သူ့ဘဝသည်နောက်ကျကျန်နေခဲ့ပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းသည်ဆည်မှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ဤအရာအားလုံးသည်မငြိမ်မသက်မှုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာများစွာသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည်ယခုဖြစ်ပါသလား။ မြေတပြင်လုံးအရာအနည်းဆုံးပတ်ပတ်လည်အရာဖြစ်၏။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအရာအားလုံးသည်၎င်း၏အစွန်းတွင်တောက်ပနေသင့်သော်လည်း၎င်းသည်မီးခိုးရောင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုအခါယဇ်ပုရောဟိတ်ယဇ်ပုရောဟိတ်က“ တစ်ခုလုံးသည်ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းများထက်ပိုသည်” ဟုပြောခဲ့သည်။ ဤဝါကျပြီးနောက်၌ပင်အရာအားလုံးသည်မတောက်ပတော့ပါ။ မြေတပြင်လုံးအရာအားလုံး၏ရှင်းလင်းသောထို့အပြင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာနောက်ထပ်တစ်ခုသာရှိတယ်။
အဘယ်အရာကိုမျှအရာအားလုံးမဟုတ်သောအရာ၏ကမ္ဘာကြီးကိုဖြစ်ပါတယ်။ တစ် ဦး ကခွက်ကိုကုလားထိုင်မဟုတ်ပါဘူး။ တစ် ဦး ကစားဆင်ယင်တိမ်တိုက်မဟုတ်ပါဘူး။ ခွေးကိုပြောစရာမလိုပါ။ ခွေးတစ်ကောင်သည်စာငှက်တစ်ကောင်နှင့်တူရုံမျှသာမဟုတ်ပါ။ အားလုံးမဟုတ်သောအရာအားလုံးဘာမျှကမ္ဘာ၏အတူတကွလာကြ၏။ တချို့ကသေပြီးနောက်ဘာမှမဖြစ်လာဟုပြောကြသည်။ သငျသညျအမှုအရာမဟုတ်သောအပေါငျးတို့သအကြားရှိနေထိုင်ချင်ပါသလား? ဒါဟာမဟုတ်သောအရာ၏ဗီရိုထဲမှာတော်တော်လေးတင်းကျပ်စွာဖြစ်လိမ့်မည်။
ပျော်ရွှင်မှုသည်လိုအပ်သောအရာထက်မကလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပျော်ရွှင်မှုသည်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ပျော်ရွှင်မှုကိုဘဝ၏လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းပျော်ရွှင်မှုသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်မှုရှိနေဆဲနှင့်ရှိနေမည်။ ခံစားမှုချောကျိကျိဖြစ်ပါတယ်။ အပျော်အပါးသည်အလွန်ပင်လွန်ကဲသောတပ်မက်မှုဖြစ်သည်။ ခံစားမှုသည်မစဉ်းစားပါ။ အူသည်လိုအပ်သည်ထက်ပိုမိုအစာကြေသောအခါပျော်ရွှင်သည်။ ကျေနပ်မှုသည်ချိုမြိန်စေသော်လည်းသကြားသည်ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်သည်။